Uncategorized | welcome Liban Mukhtar Ramadan's Web-Page Contact Emails: Rabadaan2@gmail.com or Rabadaan1@hotmail.com | Page 3
Aaliya! more than a woman
Posted by Liban Mukhtar Avobankz on April 5, 2013
Aaliya! try again
QIIMAHA JACAYLKA QALAD LOOMA YEELO!
Posted by Liban Mukhtar Avobankz on October 6, 2012
C/qani wuxuu ahaa wiil dhalin yaro ah oo la nool labadiisa waalid wuxuuna ku noolaa magaalada Laas-Caanood wuxuuna wax ka dhigan jiray dugsi in waxoogaa leeg u jira gurigooda, C/qani wuxuu ahaa wiil aad u qurux badan gabadhii aragtaana aanay ka jeesan jirin, C/qani se marnaba ma hayan wiil waxaas oo hablo ah u jeeday waayo wuxuu aduun ka fiirsan jiray Hodan oo ahayd wadnihiisa iyo waaxyihiisa mar walba oo dhalin yaradu weydiiso halka ay hodan ku nooshahayna wuxuu ugu jawaabi jiray waxay imaneysaa maalin markaas waad arki doontaan. Maalin ayaa C/qani oo fadhiya geed hoostii waxaa u yimi saaxiibkii Saalax kuna yidhi saaxiib maanta maxaad keligaa halkan la fadhidaa C/qani oo hadalkii uga jawaabaya ayaa ku yidhi saaxiib maanta waxaan xasuustay jacaylkii yaraanteydii ee ilaa hada aan kool koollinaayo waxaan xasuustay xiligii yaraantayada aniga iyo Hodan wuuxuna C/qani isla markiiba bilaabay in uu uga sheekeeyo saaxiibkii Saalax jacaylka baaxada weyn ee kala dhex maray isaga iyo Hodan isaga oo u dhigay sidan. “Waxaan ahaa wiil yar oo jacelaa in uu mar walba kubbad ciyaaro ama daawado maalin aniga oo ku degdegsan kubbada waxaa jidka igaga soo hor baxday Hodan oo aad moodo biyo dahab, wuxuu wejigeedu u dhalaalayey sidii cadceed markaas soo baxday markii ay indhahaygu qabteen waxay ila noqotay u qaadan waa iyo layaab waayo xiligaa waxaan aqaanay hablaha ku nool magaalada Laas Caanood badankooduna waxay ahaayeen kuwo i daneeya oo i daba yaaci jiray, saalaxaw waxba yaana hadal kugu daaline aniga oo isku haya ma la hadashaa iyo ma iska deysaa ayaa waxay gabadhii igu tidhi walaal waxaan doonayaa in aad ii tilmaamto Parevite-ka …………. hadii aad awoodan aad i soo tustid isla markiiba hadal kama sugine waxaan ku idhi kaalay walaal aan ku soo tusee aniga oo doonyey in aan la sii hadlo inta aan jidka sii socono. Jacayl waa balaayee waxaa aniga iyo gabadhii na dhex martay sheeko yar oo gaaban iyada oo aan is weydaarsanay magacayadayadii. Barasho ka dib aniga iyo Hodan waxaan isu qaadanay jacayl xad dhaaf ah waxaana labadayaduba isu qaderin jirayn sidii laba qof oo nolosha wadaagay. Maalin ayaa waxaa dhacday in Hodan Aabeheed uu ogaado jacaylka aniga iyo inantiisa na dhex maray Kadiban wuxuuna si degdeg ah ugu diray debedaha maalintaas wixii ka danbeeyey waxaan waayey aragtidii gabadhii aan jeclaa noloshayduna waxay noqotay in aan ka fekero gabadhaas iyada oo aan meel ila joogin. C/qani wuxuu ugu danbeyntii saaxiibkii ugu soo gaba gabeeyey in uu maalin uun heli doono gabadha uu jeclaaday. Saalax oo ahaa C/qani saaxiibkii wuxuu la yaabay sheekada dheer ee soo dhex martay isaga iyo Hodan wuuxuna ku yidhi “runtii walaal waxaan kuu rajeenayaa in aad jacaylkaaga heshid” Sheekadii dhexdooda ahayd markii ay dhaamtay ayaa saalax ku yidhi wan sii Soconayaa oo waxaan aadayaa dhanka suuqa ee waa inoo mar kale. Dhanka kale Hodan waxay nolosheedu ka anba qaaday wadanka South Africa waxayna wax barasho ka bilawday wadankaas iyad oo ilawday nolosheedii yaraanta ee ay la wadaagtay C/qani. Soomaalidu waxay ku maahmaahday laba bariday kala war la’ C/qani waxa uu jacayl xad dhaaf ah u hayey Hodan una diiday hablo badan oo u heelan doonayeyna in uu guursado. Wakhtigu waa seef oo qof ma sugayee wuxuu is daba socodo oo C/qani jacaylku keli ku ahaadaba maalintii danbe ayaa waxaa telefoon uga soo dhacay waddanka South Afirca, nasiib wanaag wuxuu noqday C/qani adeerkuu wuxuuna u sheegay in uu yimaado magaalada Hargeysa si uu halkaas uga soo dhoofo oo uu u yimado waddanka South Africa si uu halkan wax barashadiisa uga sii wato. C/qani markii uu dhuuxay hadalkii adeerkii wuxuu qaatay go’aan isaga oo go’aan ku gaadhay in uu aado Waddanka South Africa is uu wax barasho u bilaabo. Wuxuu C/qani dhawr maalmood joogay magaalada Laas Caanood isaga oo saaxiibadii oo dhan u sheegay in uu halkaas aadi doono, habeen-nimadkii uu C/qani ka soo baxayey Las-Caanood ayaa waxaa u timi Naciima oo ahayd gabadh si xad dhaaf ah u jeclayd laakiin aan u sheegan jirin jacaylkiisa waxayna salaam iyo sheeko kaftan leh dabadeed u dhiibtay warqad xidhan oo ay ku tidhi walaal C/qani waxaan kaa codsanayaa in aad warqadan akhrisatid dhawr bilood ka dib,waxa ku qoran hadii aad ka heli weydayna waxaan kaa codsanayaa in aanad iga cadhoon. C/qani waxay ku noqtay layaab wuxuuna garan waayey wax uu ku hadlo ugu danbeyntiina wuxuu ka qabalay go’aanka a u soo jeedisay… Wuxuu C/qani yimi magaalada hargeysa isaga oo halkaa uga sii kicitima aadeyna waddanka South Afirca. Markii uu halkaa tegay waxaa soo dhaweeyey adeerkii wuxuuna dejiyey gurigii uu u diyaariyey in uu dego kuna noolaado isaga oo hore ka galay jaamacadii loo diyaariyey, C/qani sidii noloshiisu ku ahayd magaalada Laas Caanood ayey ku noqotay waddanka South Africa-na wuxuuna gelinka danbe ka shaqo bilaabay dukaan ku yaala xaafada uu dagan yahay oo lagu iibin jiray macmacaanka sida chocolate iyo Buscutes i.w.m. Hadii aan dib u jaleecno dhanka Naciima iyo jacaylka xad dhaafka ah ee ay u qabto C/qani mar ay uga warantay gabadh saaxiibadeed ah oo Luul la odhan jiray kuna tidhi walaal waxaan jeclaa C/qani hadana wuxuu joogaa waddanka South Africa jacaylkaygana ilaa hada uma sheegin oo waxaan mar walba is lahaa waad ku guuleysanaysaa wuuna ku dareemi doonaa aniga oo meesha kasaaray in wax walbaa u baahan yihiin dhaqaajin jacaylkuna u baahan yahay in lays dareensiiyo, runtii walaal hada meel aan kala xiriiro ma lihi C/qani ayey Naciima iyada oo saaxiibadeed ka dooneysa talo hadal ugu gaba gabeysay. Luul waxay saaxiibadeed ku tidhi walaal hadii uu C/qani halkan joogo ama ciwaan lagala xidhiidho aad hayso wax waan kaala qaban lahaa laakiin waxay hada noqoneysaa in aa sidii markii hore aad u sugeysay u sugto ilaa inta aad si toos ah u arkaysid jacaylkaagana ugu soo bandhigaysid. C/qani halkii ayuu ka sii waday shaqadiisii iyo waxbarashadiisii isaga oo lacagaha uu helo aan ku ciyaari jirin ee meel wanaagsan dhigan jiray si uu wax ugu qabsado noloshiisa. Habeen ayaa C/qani waxaa wiilal ay saaxiibo ahaayeen oo ku noolaa wadanka South Africa u kaxeeyeen aroos markaasi wiil soo degay dhigtay markii arooskii la yimi ayaa waxaa C/qani ku mashquulay hees ka baxaysya CD-ga oo dadku dhegeeysanayeen kuna luuqeeyo Alfanaan Lafoole.Dumarkaba Aduunbaa
Iigu Dhaga nuglaayoo
Aan soo Dhaweeyee
Dhaawicii horeen qabey
Waxad tahey dhakhtaradii
Mudo iga dhayeeysoo
Waad i dhiiri galisee
Hadii aad dhaqaaqdood
Inaad Dhoofto jeceshahey
Kusidaa ma Dheeliyo
Uma seexdo Dhinacyada
Kuma tuso Dhibaatoo
Ayaan Dhalad nasiibliyo
Mid hoodale hakaa dhigo
Adaa dheeman iyo luul
Iyo dhagaxa dahabka ah
Qiimiga wax dheeroo
Adigaa dhir ubax
Iyo dhool aroor da’ay
Dhul xareedi wadhantahey
Uga dhigan nafteeydee
Haduu taarku soo dhacey
Dhawaan soo bax kugu yidhi
Dharaar qudha aduunyada
Hanti aad ku dhaqatiyo
Ha ka waayin Dharagoo
Mid hoodale hakaa dhigo.C/qani waxa uu aad uga fekerayey sida uu fanaanku u amaanayey gabadha isga oo ku tilmaamayey dheeman, luul, dhagax, dahab ah iyo weliba sida wanaagsan ee uu ugu duceenayey isaga oo leh ilaahay ha kaa dhigo mid nasiib leh hoodan leh oo ayaan dhalad ah , isaga oo halkii fadhiya ayaa waxaa u yeedhay wiil ay saaxiib ahaayeen kuna yidhi kaalay walaal caawa waxaan ku barayaa dhalin yaro badan oo ay ka mid tahay gabadh in badan halkan joogtay yaraanteediina timi oo halkan inta ay wax barasho ka bilawday hadana shaqaysata. Wiilkii oo la odhan jiray xasan sidii uu u soo waday C/qani ayuu wuxuu hor keenay Hodan oo quruxda aad moodeysid qoftii uu fanaanku u heesayey,C/qani wuxuu markiiba galay dareen dheer wuxuuna sidii qof walaalan oo kale u eegay gabadhii, xasan ayaa la yaabay kuna yidhi maxaa ku helay walaal barasho wanaagsan gabadhan waxaa la yidhaahdaa Hodan, hodan walaal wiilkan waxaa la yidhaahdaa C/qani wuxuuna halkan joogay in muddo ah oo jaamacadna waa dhigtaa waana shaqaystaa.. Aduun subaxba waa cayn oo hore ayaa loo sheegay ee Hodan maba aha qoftii hore ee uu jeclaaday C/qani markii ay waddanka South Afirca timi waxay la qabsatay nolosha halkan waana ilawday wixii yaraanteedii iyo jacaylkii ay soo sameysayba, C/qanina waxya u baratay sidii qof cusub oo hada ay barashadoodu isugu horeyso C/qani se wuxuu dareemay in ay tahay Hodan ileen qof wax jecel ma anbadee wuxuuna go’aan ku gaadhay in uu marka xafladu dhamaato sii dhaweeyo si uu wax walba u ogaado. Markii xafladii dhaamtay waxaa qof walba aaday gurigiisii dadka intii is garaneysayna waa is raaceen C/qani oo baabuur watay waxaa u suurto gashay in ay soo raacaan hodan iyo laba gabdhood oo kale wuxuuna markii uu labadii hablood ee kale gurigooda geeyey u suurto gashay fursad uu ku wareysto su’aalana ku weydiiyo hodan isaga oo sheekada uga bilaabay hodan walaal su’aal aan kuweydiiyee weligaa waddankaagii hooyo ma aragtay haa walaal ayey hodan la soo booday aniga oo yar ayaan ka imi isla markiibana waxay Hodan gudo gashay in ay C/qani uga sheekayso nolosheeda iyo wiilka ay sida xad dhaafka ah u jeceshahay ee Shaakir iyada oo ku tidhi C/qani walaal waxaad tahay qofkii u horeeyey ee aan noloshayda si daacad ah uga sheekeeyey runtii waxaad tahay wiil walaalkay oo kale ah. Markii ay kelmadaa tidhi waxaa C/qani ka soo gabax tidhi ilin xiligaana waxaa u baxaysay heesta ay ku luuqayso Deeqa Bilan.Orod iyo ayaan
Waa la aaminnaa
Siday kuu eeggayeen
Iyeey ilmadu raggax
Ay ka tiri raggax
Afar iyo tobnaad
Dayax oogta hore
Qorax kala ordeen
Ileyska iyo nuur
Ayaad ii tahee
Araxda igu qaad
Uurka ii banee
I liq oo I hay
Ubax iigu keen
SIDAAN ANNIGU KUU AHAY
ADNA II AHOOW!
Waa la irkaddaa
Siduu kuu aawilaayaad
Illeys baxay u tahay, u tahay
Onkod iyo hillaac
Ilcas iyo xarreed
Eegmada ku wacan
ADNA II AHOOW! Markii ay Hodan aragtay ilinta ka daadaneysa dhabanadiisa ayey ku tidhi walaal maxaa ku helay ee aad la ilmeysay ma sheekada is oo martay ayaad ka naxday. Maya ee walaal guul darada jacayl ee i garabsatay ayaan ka naxay runta hadii aan kuu sheegana anigu waxaan kuu jeclahay si xad dhaaf ah ilaa yaraanteydii ilaa hadana waan ku jeclaa dartaana waxaan u daayey hablo badan wuxuuna C/qani gudo galay in uu noloshii ilaa yaraantiisa uga sheekeenyo isaga oo xasuusiyey jacaylkii ay wadaageen Hodan se waxay si badheedh ah oo aan shaki ku jirin isaga indha tirtay C/qani kuna tidhi waad edeb darantahay waxaagu ma waan ku arkay oo ku caashaqay miyaa? goorma ayaad i jecelayd oo aan jacayl kula sameeyey waar waad indha adagtahay ee isdeji teeda kale meeshan maaha Laas -Caanood ee waa South Africa oo yurub waxba kama dhacdo hana isku dayin in aad mar danbe horteyda soo istaagto.C/qani wuxuu u qaadan waayey waxa dhacay iyo sida ay isu bedeshay nolosha Hodan wuuxuna isaga oo is ciil kaambinaya ku hadaaqay heesta ay ku luuqeyso Sahra Axmed ee….Naf ku jecel Aduunyada
Baa ugu wacan wax nololoo
Nabad lala wadaagoo
Nimco lagula waaree
Ma nugliye kalgacalbaa
Naar iyo ka daran olol
Markuu nugeyga kaa galo
Nabar weeye halisee
Ee taa naqdiga gali
Oo soo noqnoqoshada
Ha iga moodin nacasnimo
Anna haddii aan ku naawiley
Naqba waa la dhawraa
Nasiib ha igu kaa simo
Nacab iyo Sokeeyaba
Ma nastoo jacaylbaa
Nadi ila haleelee
Igu noqey mid halisoon
Kaba nuuxsan waayoo
Naaftoo qalbigii buu
Nudub iga sameeystee
Anna hadii aan ku naawiley
Onkodna nawda ku hayaa
Igu heshey Nugaaloo
Kaligey ku noolee
Adna keymo baadliyo
Dhul naruuro joogtaa
Naxdin li’ ku hurudaa
Nabsi dhoowri mayside
Nasiib ha igu kaa simoHodan uma dheg taagin hadalada baroorta iyo calaacalka isagu jira ee C/qani waxayna si degdeg ah uga degtay baabuurkii iyada oo abaartay gurigeeda oo wax yar u jiray.C/qani isaga oo madaxu xanuunayo ayuu ku laabtay gurigii uu deganaa wuxuuna isaga oo fekeraya soo xasuustay habeenkii uu ka soo baxayey Laas-Caanood iyo sidii uu u faraxsanaa waxayna maskaxdiisii xasuusatay warqadii ay u dhiibtay Naciimi deg deg ayuu u abaaray qolkii hurdada isaga oo shondadiisii furay kalana soo baxay warqadii wuxuuna isla markiiba ku bilaabay akhris “waxaad iga gudoontaa walaal salaan aad iyo aad uqaali ah salaantaas oo qof muddo badan six ad dhaaf ah kuu jeclaa kuu soo diray kana timi unugyada jidhkiisa oo idil walaal hadii aan kuu sheego waxaan ku jecelahay muddo afar sano gaadhaysa qalbigeyga waxa ku jirana waan kuu soo bandhigi kari waayey xishood gabdheed awgeed,waa laga yaabaa walaal maanta in aad haysatid qoftii sida xad dhaafka aad u jeclayd laakii ma ogtahay nafta ku jecel ee kuu dhimaneysa ayaa mar walba mudnaanta mudan,walaal anigu noloshaada waan la yaabay waayo boqol hablood oo ku daneeya ayaand misna dheg u taakin taasina waxay turjumaysaa in qoftii aad jeclayd aan weli laguu abuurin,C/qani hadii walaal aad jacaylkaaga ku guuleysatay taasi waa meesheeda waayo markii horeba qalbigaaga boos kuma lahayn hadii se aad aad tahay mid weli aan helin jacayl waxaan kaa codsanayaa in aad dareenkaaga ii soo jeedisid waayo waxaan ahay gabadh ilaa hada ku jecel kuna sugeysa.” Markii uu C/qani warqadii dhameeyey waxaa indhihiisa isku soo taagtay ilin wuxuuna isagu ka ciishooday sababta uu warqada u furi waayey intaasoo dhan ee ay shondadiisa ugu jirtay, C/qani wuxuu bilaabay is barbar dhig Hodan iyo Naciima wuxuuna qalbigiisu siiyey in Naciimi tahay qoftii uu sida dhabta ah nolosha ula wadaagi lahaa isaga oo ka cabir qaatay gabadhii uu jeclaa sida ay ku ilawday iyo Naciima oo u sheegtay in ay afar sano jeclayd ilaa hadan jeceshahay sugaysana. Dhanka kale C/qni danba Kama gelin hodan oo qof uu yaqaanaba Kama dhigin manuuna raadin oo kamuu daba dhicin. Maalin ayey C/qani iyo Hodan ku kulmeen shir ay lahaayeen dadka soomaaliyeed ee ku nool South Africa waxayna hodan isku dayday in ay la hadasho wuxuuse C/qani ugu jawaabay kelmadahan naxdinta leh.Ruuxii balan jara badaa karahdeeBerri baan ku jeclaaye kaa baxayQasil baan kaa cabay qadhaadh badanQalbigii ku jeclaana kaa qanac! Hadii aan jeleecno dhankii Naciima waxay niyada ku haysay in uu C/qani maalin u soo laaban doono guursana doono oo jacyal wadaagi doonaan. Muddo markii uu joogay C/qani wuxuu dhameeyey wax barashadii wuxuuna lacag aad u fiican ka sii helay shaqadiisii isaga oo isu xidhxidhay aroos waxaase qof walba aad moodeysay in korkiisa malab loogu daadiyey oo hablo badan oo ku noolaa wadanka South Africa gaar ahaan caasimada jo……. C/qanise marnaba ma ahayn mid u dhegtaaga ee waxaa hor taalay oo uu si toos ah uga fekeri jiray Naciima isaga oo mar walba akhrisan jiray warqadii ay u soo qortay kana dhigan jiray wehel. Wuxuu ilaahay barakeeyo ayaa barako ku jirtaa ee shaqadii waa u sii wanaagsanaatay waxaana C/qani u suurto gashay in uu jago wanaagsan ka helo shirkada baabuurta yaryar u soo dejisa wadanka South Africa. Markii uu in muddo ah shaqeenayey C/qani ayaa la siiyey fasax 4 bilood ah oo uu ku aado dalkiisa iyada oo tigidhika tegitaanka iyo noqoshadaba ay ka soo bixiyeen shirkaadii uu markaa u shaqeenayey C/qani markii uu yimi waddankiisa hooyo wuxuu si degdeg ah u aaday magaaladiisii iyada oo ay sugayeen dad badan oo ay ka mid ahaayeen waalidiintiisu iyada oo Nimcana ay hamuun aad u ba’an iyo sugitaan dheer ay u haysya C/qani Naf wax jeceli beer jilicsanaa C/qani wuxuu u holaday dhankii gurigii Naciima markii uu u tegayna wuxuu isku duubay isga oo leh waan ku jeclahay Naciima mar walbana waxaan is lahaa oo niyada ku hayey ma helaysaa Naciima mase waa laga guursanayaa.C/qani wuuxu ku guuleystay jacyalkiisa iyo in uu hanto wuxuuna arooskoodu ka dhacay magaalada Laas-caanood iyada oo Naciimina ahayd mid si aad ah ugu faraxsaneyd mar walba sida wanaagsan ee illaahay u sulan siiyey jacaylkeeda daacada haa Ugu danbeyntii wuxuu C/qani u sii kaxaystay gacalisadiisii South Africa markii uu ku laabanaye.
Qiso layaab leh!!!!
jaceyl dhex maray jini iyo insi qiso dhab ah Xasan Olol Jaamac waxa uu guursaday gabadh Jin ah oo la yidhaahdo Aamina Suldaan, laakiin Xasan Olol Jaamac waxay qisadani yaabka lihi ku dhacday oo ay la kulantay sannadkii 1948-kii, sheekadaasi Xasan Olol Jaamac marar hore oo dhowr ah ayuu ka sheekeeyey, ka dib markii ay waraysiyo la yeesheen qaar ka tirsan warbaahinta dalka ee kala duwan, wuxuuna Xasan sheegay inay naagtaasi jinka ahi u dhashay 14-caruur ah, laakiin Xasan Olol Jaamac waxa uu hadda ku sugan yahay oo uu joogaa magaaladda Hargeysa, sidaasi daraadeed ayuu Xasan Olol Jaamac uga sheekeeyey qisadaasi ku dhacday iyo naagtaas jinka ah ee uu guursaday, iyada oo ay Xasan Olol Jaamac hadda da’diisu tahay 70-jir.
Xasan Olol Jaamac isaga oo ka sheekaynaya bilowgii sheekada iyo sidii uu ku guursaday ee ay u kulmeen naagtan jinka ah wuxuu sheekadiisa ku bilaabay (Waxaan joogay magaaladda Xiis, ka dibna wiilal ayaa ka yimid magaaladda Berbera, markaasi ayaan ku idhi “Maxaad ka shaqayn jirteen”, waxayna ii sheegeen inay maraakiibta xoolaha qaadda ka shaqayn jireen, markaas ayaan ku idhi “Xagee Berbera loo maraa”, waxayna igu yidhaahdeen “Xeebta ayaa loo maraa amaba doon ayaa la raacaa”, dabadeedna anniga oo abtigay la jooga Xiis ayaan ku is idhi Berbera u shaqo tag, ka dibna abtigay ayaan u sheegay, ka dibna waxa uu igu yidhi “Doonyuhu ha yimaadeen, dooni ayaan ku saari doonaaye”, waayo berigaasi gawaadhi ma jirin oo doonyo ama safaro lug ah ayaa Berbera lagu tegi jiray, markaas abtigay waxaan ku idhi “Waxaan haystaa safaro aan raaco”, abtigayna waayahay ayuu igu yidhi, ka dibna inta uu dukaan I geeyey ayuu ii soo iibiyey laba go’, timir, sonkor iyo bariis aan sahay ka sii dhigto, isla markaana waxa uu I siiyey laba rubadood oo ah lacagtii (Indian Money) la odhan jiray, laakiin safaro ma jirin oo waxaan abtigay u sheegayey been aan kaga baxsado’e, markaa habeenkii oo dhan ayaan waaga berigiia ilaalinayey inta aan sahaydaydii madaxa dhigtay, ka dibna markii daakiraadii salaadda subax lagu dhuftay ayaan albaabka iska furay anniga oo abtigay ka dhuumanaya, waanan dhaqaaqay waxaanan qaaday waddada xeebta ee dhinaca Berbera u baxda, waagaa nin dhaliyaro ah oo laba lugood ku orda oo iga dheereeyaa ma jirin, sidaasi darteed marna waan ordayey marna waan tallaabsanayey, dabadeedna goor ay makhribkii tahay ayaan arkay gabadh badda ku dabbaallanaysa oo dharkeedii iyo alaabteediina ay bannaanka taallo, markaas ayaan is idhi qoodh iyo xero gabadha quruxdaas leh ee cidladaasi joogta beerka kaga deg, dabbaashana xariif ayaan ku ahay oo Xiis ayaan ku bartay, ka dibna dharkii iyo sahaydii ayaan dhigtay oo baddii ayaan galay oo biyihii ayaan quusay, markaasaan labadeedii lugood dhexdooda ka soo baxay, dabadeedna inta aan mudh biyihii ka soo idhi ayaan iyadii shax ku siiyey, dabadeedna markii aan biyihii ku saydhay ayey igu tidhi “Waar dee baddaa dabbaallo oo iga durug maxaad hoosta iiga soo galaysaa”, dabadeedna markaasaan ku idhi “Aynu wada dabbaallano”, waxay iigu jawaabtay “Waxba ila dabbaallan maysid ee badweyn baad joogtaaye geestaada ka gal oo iga durug”, ka dibna inta aan dib uga durkay oo sida hoonbarada isu rogay ayaan shaanbad cidhibta ku dhuftay, si aan uga cadhaysiiyo oo ay iila dagaalanto, markaas ayaan isa soo hortaagay, dabadeedna inta ay timihii dheeraa I qabatay oo biyihii illeyn iskama ay kay dilaynoo lexo-jeclo ayaa iga haysaye, markii aan hal mar cantuugay biyihii ayey I sii daysay, ka dibna waxa ay igu tidhi “Waar ma badda ayaan kugu bakhtiiyaa mise baddaad geestaada kaga dabbaallan”, annigu illayn dagaalkii aan doonayey ayaa cusboonaadaye waan isku soo qaaday, teeda kale waxaan moodayey gabadh Insi ah manaan moodayn gabadh Jin ah inay tahay.
Weligay jinow sheekana kuguma maqal shaahidna kuguma arag, gabadhaasi mar kale ayey haddana badda I quusisay, laakiin markii aan biyihii hal mar cantuugay ayey I sii daysay, dabadeedna waxaan is idhi naagtan badda kaga adkaan mayside ee berriga ugu bax, ka dib intaan baddii ka baxay ayaan guntiga giijistay oo aan waliba gaabsaday, go’ii kale ee aan tuurta ku sitayna dhexda ayaan ku xidhay, budhkii aan sitayna labada gacmood ayaan ku qabsaday oo waxaan u diyaar garoobay dagaal, dabadeedna markii ay baddii ka soo baxday ayey iyadoo aan kala jeclayn inaan dad ahay iyo inaan duunyo ahay oo laafyoonaysa oo biyihii timaheeda ka daadinaysa oo shax-shaxda kaga siinaysa ayey iskay soo ag-taagtay markaasi ayaan ku idhi “Naa maxaad badda iigu bakhtiinaysay”,anniga oo is leh intaanay maryaha kaa gashan ee ay qaawan tahay beerka kaga deg,laakiin waxay igu tidhi “Oo ma imika ayaan kaaga raynayaa”, markii ay intaasi tidhi ayaan budhkii u taagay,balse goor ay I qaaday iyo goor ay I legeday iyo goor ay budhkii iga tuurtay toona anniga oo aan ogeyn ayuun baan arkay iyada oo gacmaheedii midna cunaha igu qabatay midna labadaydii gacmood,laakiin ima ay ciijine waxay igu tidhi “Waar ma iska tagaysaa mise kan cad iyo kan madow ayaan ku kala siibaa”. Markii ay intaasi I gaadhay ayaan annigu is la hadlay oo aan is idhi “Waar heedhe dadku marka uu is laayo waatii uu isku xiiqi jiraye ee goorma ayey gabadhani ku legeday, ushiina kaa tuurtay, dabadeedna anniga oo ammakaagsan ayaan iyadii ku idhi “Naa bal I sii daa waan iska tageyaaye”, markaas ayey I sii daysay, ka dibna waan dhaqaaqay, balse markii aan hal cabbaar ah sii socday ayaan dib u soo eegay, dabadeedna waxaan arkay iyadoo lebisatay, laakiin jeesigii aan sidaa u eegay saa waa iyadii oo I dhinac taagan,ka dibna waxaan is idhi “Waar adiga oo dadka u dheereyn jiray kuma ay soo gaadheene ma mid kale ayaa meesha ku sii aasnayd,dhinicii ay iga maraysay mooyee dhinicii kale ayaan eegay mise waa cidla,anniga oo yaaban markii aan saddex goor tallaabsaday ayey gacanteeda garabka iga saartay oo ay igu tidhi “Inaadeer xagee baad ku socotaa”. Illayn nin cadhaysan oo ay ka adkaatay ayaan ahaye gacanteedii ayaan iska tuuray, ka dibna inta ay I hor qabataysay bay igu tidhi “Waar dadku waana is dilaa, waana heshiiyaaye xagee baad ku socotaa”, markaasi ayaan anniga oo dudaya ku idhi “Waxaan ku socdaa Berbera”, markaasi ayey igu tidhi “Caruur cayntaa ba’day oo Berbera intee baad ku gaadhaysaa”, markaasaan ku idhi “Caawa ama habeen dambe ayaan gaadhayaa”, markaasi ayey igu tidhi “Toban cisho kuma gaadhaysid ee waxaad yeeshaa reerkayaga oo halkan yaalla caawa u sii hoyo,oo halkaasi raashinkaaga iyo shaahaaga ku sii karso,ka dibna marka aad nasato meeshii aad ku socotay qabo,laakiin waxaa jirtay in aabaheed hore ugu yidhi aroortii Jin iyo Insi wixii aad hesho soo kaxayso,waan ogolaaday sheekadii ay ii soo jeedisay oo waxaan ku idhi “Waayahay ee inna mari”,ka dibna inta ay gacanta midig iga buuxsatay ayey xaggii buurta ii jeedisay,buurtana haddii aan u lugayno waaga ayaa nooga beryaya oo ma gaadhi karno dusheeda sare,laakiin ila booday iyo ila duushay ma garanayo, ee waxaan arkay mar qudha annaga oo buurta dusheedii taagan,dabadeedna niman Mawlac (Masaajid) ku tukaday oo jin ah ayaa igu soo yaacay,iyaga oo qaylinaya oo leh “Alla Insi ayey wadataa”,ka dibna inta ay xageeda dambe I marisay ayey iyagii Af Afka-Shiinaha u eeg kula hadashay,cabbaar markii ay afkaasi kula hadashay ayey haddana Af-Soomaali kula hadashay oo ku tidhi “Anniga may garanaysaan inaan Aamina Suldaan ahay”,waxay ku yidhaahdeen “Haa, waanu ku garanaynaa”,markaasi ayey haddana ku tidhi “Aabahay ayaa igu yidhi Jin iyo Insi wixii aad hesho soo kaxayso,markaa wiilkaa yar baan soo helay oo ma taaban kartaan”,ka dibna waxay ku yidhaahdeen “Buulkaa ha sii fadhiisto oo yaanu na soo dhex galin inta aanu Aabahaa soo waydiinayno”,dabadeedna buulkii baa lay geliyey,laakiin labada suul ayaan ku fadhiistay oo waxaan is leeyahay marka ay kaa fogaadaan tow dheh oo jarka buurta iska tuur,ka dibna inta markii aan cabbaar hadalkooda dhegta u sii dhigay ayaan is idhi kaa durkee tow dheh,sow buulkanowba gaadh baad iga tahay,ka dibna markii aan orday ayuu buulkii igu soo booday oo futada dhulka iigu dhuftay,waan yaabay,dabadeena anniga oo fajacsan ayey igu soo noqdeen oo igu yidhaahdeen “Oo ma baxsaad is lahayd”,markaasi ayaan ku idhi “Maya ismaan odhan baxso”,ka dibna waa lay kaxeeyay,ka dibna waxaa lay geeyey meel deyr leh oo ay Kebdo iyo Cowsas ku wareegsan yihiin oo waliba iftiimaysa,isla markaana ay wax waliba yaalliin,markii albaabka meeshaa lay soo taagay ayaan ku idhi “Asalaamu Calaykum”,waxay iigu jawaabeen “Wa Calaykuma Salaam”,markaasi ayaa laygu yidhi soo soco oo Suldaankii waa kaa dhexda fadhiya ee salaan,ka dibna inta aan kabihii iska bixiyey ayaan Suldaankii gacan qaaday. Markaasi ayuu Suldaankii furaashkii uu ku fadhiyey inta uu cagihii laabtay agtiisa I fadhiisiyey, wuxuuna yidhi “Koob shaah ah oo bigeys ah u soo shuba”, ka dibna waa lay soo shubay, waanan cabbay shaahii balse markii aan cabbay shaahii ayaan ku idhi biyo aan cabbo ii soo shuba, markaasi ayuu Suldaankii yidhi “Biyo iyo Caano ha laysugu shubo maanta oo dhan ayuu soconayey oo wuu beer-xoormayaaye, ka dibna intii ayaan cabbay, markaasi ayaan dhididay, ka dibna markii aan qaboobay ayuu Suldaankii igu yidhi “Waaryaa Xasan Olol”,markaasi ayaan is idhi “Waar nin aabahaa Olol garanayee”, markaasi ayaan ku idhi “Hee”,ka dibna waxa uu igu yidhi “Aamina ma wada socoteen”, ka dibna waxaan Suldaankii ku idhi “Aamina ma gabadha ila socotaa”,markaas ayuu igu yidhi “Haa”,markaasi ayuu igu yidhi “Oo maxay ku soo tidhi”,markaasi ayaan ku idhi waxay igu tidhi “Reerkayaga caawa u sii hoyo oo ku sii raashin karso,ka dibna meeshaad ku socotay u sii ambabax”,dabadeedna Suldaankii wuxuu la hadlay gabadhiisii oo halkan aloolka dabadiisa taagan oo uu ku yidhi “Aamina ma caynkaasi baa”,ka dibna Aamina waxay aabaheed ku tidhi “Aabe si kale ayaanu igu soo raaceen oo sidaasi ayaan ku soo kaxeeyay.Odeygii Suldaankii ayaa haddana xagaygii u soo jeedsaday oo igu yidhi “Waar yaa Xasan Olol,gabadhu way ku rabtaa ee adigu ma rabtaa”,markaasi ayaan is idhi waar ma nimankii aad buulkooda ka baxsan kari wayday ayaad maya odhan karaysaa,ka dibna anniga oo baqanaya ayaan ku idhi “Haa,waan rabaa ee aan reerkayagii xoolo kaaga doono”,markaasi ayuu yidhi Suldaankii “Annaga xoolo lanama siiyo ee annaga ayaa bixina ee gabadhii ma rabtaa”,Haa ayaan idhi dabadeedna,ka dib Suldaankii nin gadh-weyn oo meesha fadhiyey oo uu Sheekh Cumer ugu yeedhay ayuu ku yidhi “Sheekh Cumerow annigu gabadha aabaheed ayaan ahaye,wiilku waa wiil yare wakiil u noqo” ka dibna Sheekhii ayaa igu yidhi “Xasanow ma I wakiilatay” markaa da’daydu 15-jir ayey ahayd,Haa ayaan ku idhi oo Sheekhii ayaan wakiishay,dabadeedna Suldaankii iyo Sheekhii ayaa gacmaha isa saaray oo wixii meher ahaan jiray dhameeyey laakiin intii uu meherku socday ayaa aqal wayn oo ila-xidh leh la dhisay,waxa kale oo lay keenay dhar aanan waligay arag oo xariir ah oo ay ka mid yihiin Go’ shaal ah iyo macawis abu-sarande ahaa koodh iyo cumaamad,ka dibna waxaa lay siiyey biyo aan ku soo maydho ka dibna markii aan soo maydhay ee aan soo labistay,ayaan annigii is waydiiyey illayn waxaan sitaa labis igu cusub oo aan waligay xidhan.Suldaankii ayaa laba wiil ku yidhi alaabtiisa u qaada oo gurigiisa geeya,dabadeedna wiilashii ayaa I kaxeyeey oo gurigii I geeyey soo gal ayey igu yidhaahdeen,markii aan galayna,waxaan arkay guri wada kaahaya isla markaana aanu fuunays iyo tiriig midna ka baxayn ka dibna anniga oo gurigii daadaawanaya ayaan maqlay shalaad iyo qasiidooyin soo baxay, “Hooy Nebiyoow Nuur Allow,Maxamed Nebi magac samaw”,markaasi ayaan is idhi wallee tii Aamina ayaa la soo wadaa,ka dibna anniga oo halkii taagan ayey Aamina oo ay laba gabdhood galbinyaan aqalkii dalaq soo yidhaahdeen markaasi ayey Aamina igu tidhi “Waar maxaa meesha ku taagay”,markaas ayaan anniga oo is tiilaya ku idhi “Dee adiga ayaan ku sugayey”,ka dibna markaasi ayey igu tidhi “Waayahay” waxaanay iga bixisay maryihii aan sitay oo waxay igu soo reebtay garan iyo macawis kali ah waanay I fadhiisisay,laakiin markii aan fadhiistay ayaan si kaftan ah ugu idhi “Waadigan malxiisada wate’e aan anniguna malxiis aan doonto” markaasi ayey igu tidhi “Annaga ayaa kuu malxiis ahe Iimaanso”.
Markii ay igu tidhi iimaanso annaga ayaa kuu malxiis ahe, anniguna waayahay ayaan ku idhi, laakiin markii Aamina waxoogaa sheekaysanaynay ayaa sanqadhi soo baxday, ka dibna waxaa naloo keenay raashin lagu soo guray weel qori ah sida xeedhyaha oo kale, raashinkaasina waxa uu ahaa mid kala nooc nooc ah, dabadeedna anniga, Aamina iyo gabdhihii malxiisadaha ahaa ayaa halkii raashinkii ku wada cunay, ka dibna illayn waxaan ahay nin aan maanta oo dhan waxba cunin oo gaajoonaya’e waxaan markiiba cabbay caano gadhoodh ah iyo hadhuudh ku jira,laakiin markii aanu raashinkii dhamaantayo wada cunay ee weelkii la celinayey ayey Aamina Suldaan hilibkii ka reebtay jeeni iyo awlal,annigu raashinkaa iyo weelkaa cid keentay iyo cid weelkaa guraysa midna ma arko,mana aqaano,intaa ka dib Aamina way I kaxaysay oo waxay I gaysay halkii aanu seexanaynay,ka dibna labadii malxiisadood waa la fasaxay,waxaanay nagu yidhaahdeen “Nabadgelyo illayn aroos lagumana raago lagamana raago”.intaasi ka dibna Aamina waxay I siisay Go’ aan guntado isla markaana macawistii iyo garankii waxay ku dartay maryihii ay markii hore iga bixisay,iyaduna wixii ay dahab xidhnayd ayey iska bixisay,dabadeedna waanu iska sheekaysanay,markaasi ayey igu tidhi “Xasanow aabahaa iyo hooyadaa anniga ayaa caawa kaa xiga,adiguna sidoo kale adiga ayaa iga xiga aabahay iyo hooyaday,waayo nin iyo naagtii ayeynu noqonay,markaa waxaad yeeshaa horta meeshan aad hadda joogto bismillayso,ta kale marka ay da’daadu gaadho 25-jir waxaanu ku siinaynaa koofiyad,koofiyaddaasi oo ah mid aad adigu dadka arkayso laakiin aanay iyagu ku arkayn,waxa kale oo aanu ku siinaynaa fargal aad farta gashato,fargalkaasna waxaad u isticmaalaysaa marka aad meel damacdo inaad tagtid,fargalkaasi ayaad xoqaysaa,ka dibna waxaad arkaysaa adiga oo meeshii aad doonaysay taagan meel kasta ha ahaatee,waxa kale oo aanu ku baraynaa inta dhir arlada ku taal iyo nooca dawo iyo dabiib ee ay dhirtaasi leeyihiin,waxa kale oo aanu ku baraynaa inta Af ee adduunka lagaga hadlo haddii ay tahay Af Islaam iyo haddii ay tahay Af Gaalo,haddii aan wakhtigaa caqli leeyahay wixii ay Aamina ii sheegaysay waan ka faa’iidaysan lahaa,laakiin waxa ay ii sheegayso oo dhan riwaayad ayey ila ahayd,waayo inta aan aqoontaas oo dhan ka barto oo aan kala hadho ayaan maanta ka faa’iidaysan lahaa.Arrinta sida ay doonta ha ahaatee anniga iyo Aamina habeenkaas oo dhan waxaanu ahayn qoys cusub oo waanu iska sheekaysanaynay,ka dibna markii waagu baryayey ee salaadii subax la adimayey ayey Aamina igu tidhi “Xasanow orod oo soo maydho”,dabadeedna markii aan soo maydhayna Aamina gogol ayey gurtay oo ay ii gaysay geed weyn oo guriga hortiisa ah,waxa kale oo ay geedkii ii gaysay quraacdii iyo qadadii,ka dibna waxay igu tidhi “Nabadgelyo habeenkii ayeynu wax isu nahaye”,dabadeedna waxaan ku idhi “Oo maxaa dhacay sowdigii shalayba badda igula dagaalamayey”,waxay iigu jawaabtay “Shalay amar ayaan haystay laakiin wakhtigan amarkii ma haysto”,ka dibna way iska tagtay anniguna illayn xalay oo dhan nin soo jeeday baan ahaye waxaan hoos seexday geedkii,ka dibna markii aan abbaaro duhurkii ahayd ayaa waxaa ii timid islaantii Aamina dhashay ee sodohday oo Masacagalay ah,dabadeedna way I gargaraacday iyadoo doonaysa inay qadada ii kiciso,laakiin annigu ma garanayo,waxaanan misigta kaga dhuftay dhagax yar,ka dibna way iga carartay,balse maan sii seexan ee inta aan kacay oo aan bannaanka tagey ayaan soo noqday oo aan cuntadii ay Aamina ii dhigtay cunay,markii aan cunayna dib ayaan u sii seexday,dabadeedna waxaan hurdaba markii ay cadceedii dhacday ee ay maqribkii ahayd ayaan qaylo maqlay taas oo la leeyahay “Alla soddohdii ayuu dilay”,anniguna waan yaabanahay oo waxaan leeyahay “Waar xaggee baad ku aragtay soddohdan ay leeyihiin wuu dilay”,dabadeedna anniga oo yaabban ayey Suldaankii sodogay iyo soddohday soo baxeen oo ay dadkii qaylinayey inta ay u hanjabeen iga celiyeen,iyada oo islaantii soddohday tidhi “Muxuu igu sameeyey oo aad u sheeganaysaan,haddii aydaan inanka iska dhaafin waan is qaawinayaa”,sidoo kale Suldaankii ayaa isna yidhi “Wiilka hinaase ayaa idinka hayya”. Intaa ka dibna waa la iska kala tagay ka dibna Suldaankii ayaa fiidkii ii yeedhay oo igu yidhi “Xasanow waxa layna kala yidhaahdaa Jin iyo Insi, markaa saddex bahal mooyaane bahalaha inta kale oo dhan jinku wuu isu eekaysiiyaa, saddexdaa bahal ee aanu jinku isu eekaysiina waxay kala yihiin: Doofaarka, Abeesada iyo Eyga, dabadeedna Suldaankii ayaan ku idhi “Annagu haddii aanu Insiga nahay marka aanu bahal aragno fara lama gafnee na kala fogee oo bahalaha igala hadal oo yey ii soo dhowaan”, dabadeedna “Waayahay” ayuu igu tidhi Suldaankii,laakiin waxaan is waydiiyey tolow islaantii soddohdaa aragtaye odeyguna muxuu noqdaa,markaas ayaan waydiiyey Suldaankii oo aan ku idhi maxaad noqotaa,markaas ayuu igu yidhi “Waxaan noqdaa Aar (Libaax) oo magacaygaba waxaa la yidhaahdaa Aar”,dabadeedna isagii ayaan ka baqay laakiin maalintaa wixii ka dambeeyey waanu kala nabadgelnay bahalihii.
Muddo markii aan halkii joogay oo ay gabadhii Aamina Suldaan uur ii yeelatay isla markaana uu sedkeedii soo dhowaaday ayaan ku idhi “Waxaan doonayaa inaan reerkayagii soo salaamo oo aan soo arko, ta kale reerkayaga muddo ayaan ka soo maqnaa meel aan jirana ma ogee aan isa soo ogaysiiyo inaan halkan joogo”, dabadeedna Aamina waxay arrintayda u sheegtay Suldaankii, ka dibna wuu ii yeedhay oo wuxuu igu yidhi “Xasan ma reerkii ayaad rabtaa inaad soo aragto”, “Haa” ayaan ku idhi, dabadeedna Suldaankii iyo islaantii soddohday reerkayagii ayey lacag badan iyo dhar iigu dhiibeen,ka dibna Suldaankii baa igu yidhi “Xasanow aabahaa waa nin daran oo wuxuu ku odhanayaa Xasanow xoolahan tirada badan xagee baad ka keetnay markaa ha nooga sheekayn ee waxaad ku tidhaahdaa Berbera ayaan ka imi,haddii uu ku yidhaahdo maxaad ka qaban jirtayna waxaad ku tidhaahdaa maraakiibta xoolaha ayaan ka shaqayn jiray,aroortana diyaar-garow waad tagaysaaye”.
Markii ay salaadii arooryo ahayd ayaan alaabtaydii oo masar weyn oo shaash leh laygu duubay dacalka qabsaday oo aan safar u diyaar garoobay, ka dibna waxaan u jeestay xaggaa iyo Ceerigaabo, ma garanayo in cagaha wax lay geliyey iyo in kale, laakiin waxaan arkay anniga oo isla markiiba Ceerigaabo dhex-taagan, balse markiiba waxaan Ceerigaabo uga sii gudbay meeshii uu reerkayagu deganaa.
Sodogay iyo sodohday waxay hooyaday iyo aabahay iigu sii dhiibeen mid walba lacag gaar ah, taas oo ay aabahay iigu sii dhiibeen 5000 oo rubadood, halka ay hooyadayna iigu dhiibeen 3000 oo rubadood “Rubadu waa lacag xilligaasi la isticmaali jiray”, sidoo kale waxay iigu dhiibeen dhar wada xariir ah, annigana waxay I sii siiyeen 300 oo rubadood oo laygu yidhi maqaaxiyaha iskaga ilaali, markii aan reerkayagii u tagey ee aan aabahay iyo hooyaday lacagihii iyo alaabooyinkii laygu soo dhiibay siiyey ayuu odeygii aabahay ahaa ee Olol Jaamac su’aalo ila daba galay, waxaanu ugu horayn I weydiiyey “Waar yaa Xasan nimanka bad-mareenada ah ee badaha u shaqo taga,sannadaha badana ku maqnaada ayaan waligood 8000 oo rubadood kala imanine xagee baad xoolahan ka keentay”, laakiin illayn waxaan ahay nin uu Suldaankii la soo ballamaye waxaan ku adkaystay oo aan idhi “Aabe sida aad ogtahayba sigaar iyo qaad midna ma cuno, sidaasi darteed wixii aan Berbera ka shaqaystay meel
baan ku urursanayey”. Ta kale iyadoo uu odeygii aabahay la yaaban yahay Shanta Kun ee rubadood ayey islaantii hooyaday ahaydna odeygii indhaha kala hadashay oo ay ku tidhi “Annigana 3000 oo rubadood ayuu I siiyey”, ka dibna odeygii ayaa yidhi “Ka waaweyn”, marka ay sidaasi is leeyihiin waxay moodayaan inaan dharkan iyo lacagtan soo xadday, dabadeedna odeygii aabahay wuxuu la hadlay islaantii hooyaday, wuxuuna ku yidhi “Eeyaa waa islaanta waxaad yeelaysaa shan kun ee rubadood ee aan hayyo iyo saddexdan ee aad hayso waad isku daraysaa, ka dibna sanduuqaaga ayaad ku ridaysaa, laakiin dharka iska isticmaal”. Odeyga aabahay waxa uu ahaa odey caan ah oo la garanayo markaa waxa uu leeyahay wiilkayga Xasan haddii uu adduunkan soo xadday waa lay imanayaa, sidaas darteed wuxuu yidhi “Haddii lay yimaado annigaa dharkaa bixin doona, laakiin islaan yahay lacagtaa far ha saarin”, ka dibna hooyaday hadalkii odeyga ayey aqbashay, dabadeed markii aan reerkii dhowr maalmood la joogay ayaa odeygii aabahay ahaa waxaa u yimid nin faras wata oo Ceerigaabo laga soo diray, waxaana loogu yeedhay laba qolo oo uu kiis ka dhexeeyey, odeyguna gartooda ku jiray, laakiin odeygii waxa uu ku yidhi ninkii faraska watay “Orod oo iska tag berrito ayaan kaa soo daba baxayaaye”, ka dibna markii uu ninkii iska noqday, subaxnimadii dambe ayaan odeygii aabahay ku idhi “Aabe waan ku raacayaa”, ina keen ayuu igu yidhi , waa tii qoladii igu yidhaahdeen hanaga sheekayn , laakiin wixii ay cagaha ii geliyeen markii aan ka imanayey ayey markii aanu dhaqaaq u diyaar garoobaynay cagaha noo gasheen, dabadeedna markii aanu quraacanay ayaanu gurigii ka ambabaxnay, ka dibna halkii aanu Ceerigaabo ka tegi lahayn makhribkii ayaanu qaddar saacad ah u sii soconay Ceerigaabo, dabadeedna markii aanu garoonka diyaaradaha ee Ceerigaabo maraynay ayuu odeygii aabahay igu yidhi “Waar yaa Xasan waa xaggee meesha aynu maraynaa”, markaasi ayaan ku idhi “Waxaynu maraynaa garoonkii diyaaradaha ee Ceerigaabo”, markaasi ayuu haddana odeygii igu yidhi “waar yaa Xasan keenee lagu jiray oo wax siday”, ka dibna odeygii waxa uu ii aqoonsaday Awliyo, waxaanse ugu jawaabay “Aabe annigu inan yar ayaan ahaye maxaan qaadi karaa”, laakiin hoosta ayaan ka cadhooday oo waxaan is idhi “Muxuu Suldaankii kuu lahaa hannaga sheekayn haddii uu cagaha wax kuu gelinayo”, waayo waan gartay in wixii maalintii hore cagaha layso geliyey maantana la noo geliyey.
Markii aanu magaaladdii Ceerigaabo soo galay odeygii aabahay waxa uu fadhiistay maqaaxi, ka dibna odayaashii maqaaxida fadhiyey ayaa odeygii ku yidhi “Waar Olol ma xalay ayaad soo guuraysay”, dabadeedna waxa uu ugu jawaabay “Maya, wallee ee quraacdii ay islaantaydu saaka I soo siisay ayaan soo cunay”, ka dibna odayaashii aabahay ku yidhi “Oo Olol baabuurna intaa kuma yimaado’e maxaa ku sidday”, markaas ayuu ku yidhi “Laftayda ayaa yaabban”, haddana waxay ku yidhaahdeen odayaashii aabahay oo yaa kula socday “Oo yaa kula socday”, waxa uu ugu jawaabay “Waxaa ila socday wiilkayga Xasan”, haddana waxay odayaashii aabahay ku yidhaahdeen “Oo Xasan miyuu yimid oo la helay” “Haa”,annigu markaa waxaan ahay nin aad quruxda yaabto illayn waxaan ahaa maalintii marna wax cunayey, marna hurday, habeenkiina Aamina Suldaan legga kaga jiray. Dabadeedna markii aan odayaashii cabbaar ila kaftameen ee ay igu yidhaahdeen “Waar qurux weynaa iyo xagge buu ka yimid” ayaan meeshii ka kacay oo aan soo eegay dhalinyaradii aanu xeegada wada ciyaari jiray, berigiina qaad lama cuni jirin oo Ceerigaabo oo dhan afar odey ayaa ka qayyilli jiray markaa dhalinyaradaya oo dhan balwadayadu waxay ahayd xeego iyo kubbad. Dabadeed dhalinyaradii oo dhan ayaan casuumay oo inta aan kaxeeyay hudheelada geeyay, laakiin waxa aan cunnayaa oo dhan waxa uu isku tageen 2 rubadood, dabadeed markii aan Ceerigaabo laba habeen joogay ee ay tukhaan iyo tagfi igu cuntay illayn nin janno ka yimid ayaan ahaye ayaan go’aansaday inaan ambabaxo oo aan qabto reerkaygii iyo gabadhaydii Aamina Suldaan.
Markii aan laba habeen joogay magaaladda Ceerigaabo ayaan maalin saddexaadii aabahay ku idhi aabo waan tageyaa oo waxaan ku noqonayaa Berbera, ka dibna wuxuu igu yidhi “Xasanow aabe waan kuu soo ducaynayaa ee ma haysataa nooli, mise nooli baan ku siiyaa”, ka dibna waxaan ku idhi “Waan haystaa”, inta aan tusay 280 rubadood oo iiga soo hadhay 300 ee rubadood ee soddogay I soo siiyey, waliba aabahay ayaan siiyey 200 rubadood, waxaanan qaatay 80 rubadood, laakiin aabahay waxaan ku idhi “Aabo waxaan raacayaa gaadhi ay lahaayeen ilma gadh-case”.balse maan ahayn nin gaadhi u baahan ,dabadeedna gaadhigii aan aabahay ku idhi waan raacayaa oo istaanka ka baxaya ayaan cabbaar is ag-taagay is aan u sugo inta uu dhaqaaqayo,taasi oo aan iska dhigayo nin gaadhiga raacaya si aan aabahay u qanciyo,waxaan gaadhigii sugaba markii dambe ayuu dhaqaaqay oo wixii raaci lahaana raaceen wixii aan raacaynina magaaladda dib ugu noqdeen ayaan anniga waxaygii cagaha lay geliyey oo aan u ambabaxay xaggii reerkaygii,ka dibna waxaan markiiba gaadhay geedkii aan maalintii hoos seexan jiray oo ay gogoshaydii iyo raashinkiiba ii sii yaalliin,dabadeedna inta aan quraacdii cunay ayaan iska seexday,ka dibna wax aan maalintii oo dhan hurdaba markii ay maqribkii gaadhay ayaan waayey Aamina Suldaan,waayo maalin kasta marka ay maqribka gaadho ayey alaabta ii guri jirtay,ka dibna markii aan waayey ayaan alaabtaydii iska gurtay oo aan gurigii tagey oo waxaan alaabtii dhigtay ila-xidhka dhexe ee guriga,laakiin Aamina Suldaan oo umushay ayaa jiifta ila-xidhka dhexe ee guriga, dabadeedna inta aan u tagey ayaan ku idhi “Naa Aamina maxaad sheegtay”,markaasay igu jawaabtay “Nabad”,ka dibna waxaan ku idhi “Oo miyaad umushay”,markaasi waxay iigu jawaabtay “Haa”,haddana waxaan ku idhi “Oo maxaad umushay”,dabadeedna intii aanay ii sheegin waxa ay umushay ayey soo sare fadhiisatay oo ay maradii ka qaaday caruurtii meeshii jiiftay,waxayna tidhi “Waxaan umulay 7-caruur ah”,ka dibna inta aan naxay ayaan idhi “Bismillaahi Raxmaani Raxiim”,intaa markii aan idhina waan waayey naagtii,caruurtii iyo gurigiiba,waxaanan is arkay anniga oo cidla fadhiya,dabadeedna anniga oo yaaban oo is leh adiguna maad dambas noqotid marna is leh ma carartaa ayaa Suldaankii loo sheegay waxa dhacay markaasi ayuu yidhi “Xijaabka uga qaada”,ka dibna Aamina,caruurtii iyo gurigii ayaa igu soo noqday, markaasay Aamina Suldaan hidhaadhiday(cadhootay),ka dibna waxaan ku idhi “Maxaad la hidhaadhiyeysaa,habeenkii aad ila hadlaysay miyaad sheekada iigu dartay bisinka ha qabsanin”ka dibna waxay tidhi “Maya,kuuguma darin oo annigaa gar-daran”,intaasi ka dibna Suldaankii ayaa ii yeedhay oo igu yidhi “Waaryaa Xasan maxaad samaysay”,dabadeedna waxaan ku idhi “Suldaan bisinka ayaan qabsaday”,dabadeedna waxa uu igu yidhi “Bisinka ayaa ina kala xijaabay ee bisinka hanaga qabsanin”,ka dibna Suldaankii ayaan ku idhi “Oo Suldaan sawdinkan marka aad wax cunaysaan ee aad tukanaysaan bisinka qabsada ma kaayagaa wax qaba”,Suldaankii ayaa markaa igu yidhi “Haa oo Ilaahay baa ugu yeedhay in kiinu inna kala xijaabo”,dabadeedna Suldaankii ayaan ku idhi “Waayahay oo u noqon maayo”,laakiin haddii aan odhan lahaa “Suldaan haddii aan ilaawo ha lay saamaxo waa lay saamixi lahaa,balse maan odhan taasi”,muddo kale markii aan joogay ayey mar kale Aamina waxay dhashay 7-caruur ah,waqtigaasna waxaan buurta joogay muddo saddex sannadood ah,dabadeedna Aamina ayaan maalintii dambe ku idhi “Aamina Caden baan tageyaa”,ka dibna waxay u sheegtay Suldaankii,ka dibna Suldaankii ayaa ii yeedhay oo markii aan idhi waan tageyaa I siiyey sanduuq lacag ah iyo dhar,laakiin Suldaanku waxa kale oo uu ii sii dhiibay 100 rubadood oo igu yidhi “Boqolkaa rubadood waxaad siisaa ninka la yidhaahdo Ina Dawle oo doonidiisa u raac Caden I geena ku dheh”,waxa kale oo uu Suldaanku dhar iigu sii dhiibay abtigay oo magaaladda Xiis jooga,ka dibna abtigay baan u tagey oo aan dharkii siiyey,intaa ka dibna anniga iyo abtigay ayaa is raacnay oo u tagnay doontii Ina Dawle,waxaanu siinay 100-kii rubadood,laakiin Ina Dawle anniga iyo abtigay wuu nagu diiday 100-kii rubadood oo wuxuu yidhi “Olol Jaamac baa I qabsanaya haddii uu maqlo wiilkaagii ayuu lacag ka qaatay”,dabadeedna 100-kii rubadood wuu nagu soo celiyey,markaa 100-kii rubadood waxaan siiyey abtigey oo aan ku idhi “Abti maqaaxiyaha iskaga ilaali”,sidaasi ayaan ku raacay doontii uu Suldaanku igula ballamay,waxaanay magaaladda Xiis nagala dhaqaaqday goor casar ah,dabadeedna halkii ay saddex habeen nala sii socon lahayd ayey iyana cagaha wax ka gasheen markaasay habeenkiiba nala tagtay biyaha badda Cadmeed,isla markaasna waaberigiiba munaaradii buurta shaan-shaan ku taallay bay nala ag-tagtay ka dibna kuruugii doonta ayaa yidhi “Ka kaca Cadeni waa tane”,dabadeedna dadkii doonta saarnaa baa kaakacay oo yidhi “Waar yaa inala socday,oo yaa inala socday oo aan ilaahay ahayn”,doonto waxa ay siday adhi, ka dibna dadkii ayaa yidhi “Laba wan halla keeno oo halla siiyo Sheekh Isxaaq iyo Sheekh Ismaaciil”, ka dibna inta aan hoosta ka qoslay ayaan haddana hoos u idhi “Wadh-wadh sheekhyo, sheekhyo laysee, wallee sheekhyo idinma waddin ee anniga ayuun baa og cidda idin wadday”.
Labadii wan ayaa halkii lagu cunay, ka dibna goor casar tahay ayey doontii dekedii Cadmeed ku soo xidhatay, Suldaankii waxa uu igu sii ballamiyey doonidu marka ay dekeda Caden ku xidhato inta aad sanduuqaaga dacalka qabsato xaggaa iyo xaggaa midna ha eegin ee toos u soco oo cidna hala hadlin lagumana qabanayo oo annaga ayaa ku difaacayna, ka dibna sidii uu Suldaanku igula ballamay ayaan yeelay oo inta aan sanduuqaygii dhegta qabsaday ayaan iska tallaabsaday, dabadeedna cidina ilama aanay hadlin cidina ima arag,sidaasi ayaan magaaladdii Caden ku galay.
Markii aan tagey magaaladdii Caden waxaan raacay Taxi oo aan siiyey rubbad, wuxuuna I geeyey guri, ka dibna gurigii baa qol layga siiyey, berigaasna qaad iyo sigaar midna maan cuni jirin, laakiin Caden waxa iga helay koox I waashay oo uu watay nin la yidhaa Xirsi Baal-baal, dabadeedna balwadii iyo heedhe-heedhadii ayaan raacay, ka dibna lix sannadood ayaanan cidna juuq u soo odhan, maalintii dambe ayaan anniga oo aqal fadhiya aqalkii ku gubtay, waxayna ahayd xagaa kulul, ka dibna iyadoo ay xabbad sigaar ahi ii shidan tahay ayaan gurigii debeda uga soo baxay markaasi ayey Aamina Suldaan meel halkaas ah igaga soo baxday, markii aan isha ku dhuftay ayaan idhi qoodh iyo xero waa Aamina, markaasi ayey soo socotay oo way I salaantay oo waxay igu tidhi “Maxaad sheegtay”, waxaan ku idhi oo aan ugu jawaabay “Waa nabad”, markaas ayaan ku idhi “Oo tumaad ahayd”, markaas ayey tidhi “Oo miyaanad I garanayn”, markaasi ayaan ku idhi “Oo maalintiiba boqolaal dumar ah ayaan arkaa ee maxaan kaa garanayaa”, waanan garanayaa run ahaantii ee kiiska ayaan iska waalayaa, dabadeedna markaas ayey tidhi “Waar annigu ma ihi naagaha Cadmeed ee waxaan ahay Aamina Suldaan oo adiga ayaan ku doonayey ee bal waran”, markaasi ayaan gacan mayd ah oo baqdin ah ku salaamay oo aan ku idhi “Naa waan fiicanahay anniguye bal caruurtii, reerkii iyo dadkii ka waran”, markaas ayey tidhi “Waa la nabad qabay, waana la wanaagsanaa”, markaas ayaan ku idhi “Maxaa maanta ku keenay Caden ee aad doonaysay”, markaas ayey tidhi “Adiga ayaan ku doonayey oo gabadhaadii oo sagaal jir ah ayaa la doonay”, markaas ayaan idhi “Ma gabadha sagaal jirka ah ayaa la doonay”.
Xasan Olol markii ay afadiisii Jinka ahayd, Aamina Suldaan ugu timid Caden ee ay u sheegtay in guur loo soo doontay gabadh uu dhalay oo 9-jir ah waxa uu sheegay inuu fajac iyo amakaag u soo baxay, ka dibna yaabkii uu yaabay markii warkaa loo sheegay ayuu si la filaan ah u yidhi “Bismillaahi Raxmaani Raxiim”, laakiin marka uu bisinka qabsanayey wuu ilowsanaa dardaarankii uu siiyey soddogii Suldaan Aar, sidaasi darteed Xasan markii uu bisinka qabsaday ayuu Aamina Suldaan nuurigeediiba waayey, wuxuuna Xasan Olol magaaladda Caden ku sugnaa muddoo lix sannadood ah, ka dibna Xasan Olol Caden waa uu ka soo laabtay oo dalka ayuu yimid, iyadoo aanay isaga iyo Aamina Suldaan wax xidhiidh ah yeellan, wuxuuna markaa yimid magaaladda Hargeysa, iyadoo uu xilligaasi ahaa sannadihii dhowr iyo toddobaatanaadkii, laakiin Xasan Olol isaga oo ka hadlaya imaatinkiisii Hargeysa wuxuu yidhi “Waxaan Caden iska soo balweeyaba waxaan imid Hargeysa, dabadeedna markii aan in muddo ah joogay magaaladda Hargeysa ayaa maalin maalmaha ka mid ah anniga oo bahal busaarad ah la il-daran oo meel kaabad ah ku fadhiya waxa I soo hor maray gaadhi yar oo ay Aamina Suldaan saaran tahay, ka dibna markii aan arkay ayaan indhaha la raacay, dabadeedna markii uu gaadhigii marayey meel agtayda ah ayey Aamina Suldaan ii soo tuurtay masar xariir ah oo ay ku soo xidhay lacag aad u tiro badan, ka dibna markii ay lacagtii ii soo tuurtay ayey I dhaaftay, iyadoo aan ila hadlin, wixii muddadaasi ka dambeeyeyna maan arag wax xidhiidh ahina nama dhex-marin”.
Xasan Olol waxa uu sheegay inay Aamina Suldaan u dhashay 14-caruur ah, laakii waxa uu sheegay inay Aamina Suldaan la soo xidhiidhi lahayd haddii ay nooshahay, sidaasi darteed uu aaminsan yahay inaanay noolayn oo ay dhimatay, sidoo kale waxa uu intaasi ku daray oo uu yidhi “Aamina Suldaan haddii ay caruurtayda u sheegi lahayd inaan annigu ahay aabahood way ila soo xidhiidhi lahaayeen laakiin nasiib darro waanay u sheegin”.
Xasan Olol waxa kale oo uu ku kaftamay inay niman reer Somaliland ahi sheegteen inay Aamina Suldaan iyaga ahayd, sidaasi darteed ay yaradkii iyo xaalba ka doonayaan, maadaama bay yidhaahdeen aad sheegtay inaad gabadha oo qaawan oo dabbaalanaysa lugaheeda kala dhex-martay, wuxuuse Xasan Olol taasi kaga jawaabay inuu ogol yahay waxaasi oo dhan, laakiin buu yidhi iyaga uga fadhiyo xaaskii iyo 14-kii caruurta ahaa, hase yeeshee Xasan Olol waxa uu guursaday gabadh kale oo Insi ah.
Buuga dhacdooyinka nolosha Iyo Hal Qabsiyada
Cilmi Ismail Liibaan (BOODHARI)::
Caashaqa haween waa horaa Caadil soo rogaye
Seyidkii Cirshiga fuulay iyo Caliba soo gaadhye
Soomalidaa Caado xune iguma caydeene
Oo ima canaanteen sidaan cuud ka iibsadaye
Sidii aad go’aygii tahay iyo macawistaan goostay
Gardarriyaa maxaan Hodan Cabdaay kaaga go’i waayey
Sida geel harraadoo wax badan hawdka miranaayey
Oo hoobey loo qaadayiyo hadal walwaaleedka
Kolkaad Hodan tiraahdaanba waan soo hinqanayaaye
Hadhka galay hurdadu wa xuntee hohey maxay sexshey
Dhulka waxan xariiqaa siday dhiillo ii timiye
:: Cabdi Gahayr ::
Qabiiligu ha loollamo sidii laba quruumoode
Qabno iyo laxaad lama gudbanid qaranka daa’uude
Sidii Eebbahay kuu qadshaan kaaga qaanacaye
Waxa qiimigiinnii beddeley waa qadoodiga’e
Qiyaamii ifkuu idinku helay qiranna maysaane
Dagaalkii Jidbaaleba ninkaa joogay baan ahaye
Weligeyba meel lagu jabaan jiqilla weynaaye
Ilaahay i jecelaa muxuu jirey arwaaxayga
Layliguba geediga horuu laban lagdoodaaye
Kolse hadii hayaan loo lalabo leexay dabadeede
Laf-dhan jananka diidaa xabsiguu liinta ku cabaaye
Rabbaw yaa dantaa luud yidhaa loox yaraa tahaye
Lix kun iyo lix boqol iyo lixdaan laabta ku hayaaye
Lixdan baan jiraa yaan indhaha laydhi kaa marine
Geeluba Ugaasooy hadduu ayda miranaayo
Abeerkiisa naaxiyo hadduu aaranku is waayo
Isaguba ma kala aamusee waysu ololaaye
Nin qatani nin qada haysta waa inu ka qaadaaye
Qasnadaha harraatiya wuxuunbaa ka soo qubanne
Dabbaal niman aqoon ceel dad-liqi wa digsiin jiraye
Maantana dugaaggii miyaa dacawadii laayey
:: Maxamuud Qaloonbi ::
Waxan ahay nin guna ooy nin goba gacal wadaagaane
Geed-geed ku maran baan ahiyo lama garaacaane
Haween lacag ma diidaan haddii hoo la leeyahaye
Nin anbaday halkuu aaday waa ula ekoonayde
:: Dirir Warsame ::
Madi cararta maqasheda koris minawsan ba dhaanta
Xididkii an maamuus lahayn malihi baa dhaanta
Marwo Camal xun Maangaab ninkeed maqasha baa dhaanta
Muslinnimo ninkaan kuula socon muumminnimo khaasa
Gaal maxasta kuu dhawra ood magansataa dhaama
:: Cumar Xuseen “Australi” ::
Dhool caano laga soo lisay oo yare dhanaanaaday
Nin dhadhamiyey waa garanayaa dhulay qaboojaane
:: Nuux Gaagaale::
Nafta waxad u yaabtaa markaad naago baridaaye
:: Qamaan Bulxan::
Baadida nibaa kua deydeyi daalna kaa badine
Oon doonahayn inad heshana daa’in abidkaaye
Dadkuna moodi duul wada dhashoon wax u dahsonayne
Dalla malaha aakharo haddii loo kitaab dayo’e
Daabaca ninkii kugu dhuftee daabka kuu celiya
Iyo kii duleedsheey ku yidhi wax isma doorshaane
Inantii ganbada loo xidhee gacanta loo maydhay
Ee gelisey meeshii hadana gabaygu sow maaha
Halhayso ama Odhaaho Ifbaxay”
ERAYO IYO ODhAAHO ku caanbaxay taariikh ama dhacdo la xidhiidha oo ay ku soo ifbaxeen. Kadibna noqday halhays dadku mar kasta soo qaato, oo loo isticmaalo hadal maalmeedka caadiga. Eryadaas ama weedhahaas caanka noqday, inta badan xiqmad iyo hawraar loo qushuucay ayay ku fadhiyaan. Haddaba qaar ka mid ah erayadaasi, xigmadu ka hadhay, ayaynu halkan ku soo qaadanaynaa:(F) SHAAGLE LAGA BAQAY Halhaysani, wuxuu ku soo baxay nin ku noolaa magaalada Burco oo ahaa xamaal, lana odhan jiray Shaagle. Shaagle, wuxuu u dhashay nin xoog iyo laxaad leh, wuxuuna isku qaadi jiray dhowr joonyadood oo mid kasta ay 100 kg tahay, mar keli ah. Sidaas awgeed, ayaa muruqyadiisu u dhismeen. Haddii ay cid islaayaan Shaagle, aad bay u hawl yarayd inuu qofkaasi ay dagaalamayaan intuu kor u qaado dhulka ku dhufto. Dhowr goor ayuuna sidaas ku sameeyay dad ay is farasaareen. Warkii ayaa la is wada gaadhsiiyay. Sidaasi ayayna ku caanbaxday halhayskan ah: Shaagle Laga baqay WAA AF-SALAX-KU-DHAGAYAGII: Erayadan kor ku qorani, waxay ka soo ifbaxeen sheeko dhacday oo xaqiiqo ah, waxayna noqdeen erayo reebay xusuus iyo halqabsi. Erayadan, waxay ku yimaadeen, oo yidhi nin la odhan jiray Ina Xaggaa Dheere. Ina Xaggaa Dheere wuxuu ahaa nin allakood ah. Allakood waxay soomaalidu tidhaahdaa, ninka ka kaftama ama ka sheega Illaahay, wax aan ku habboonayn oo kaftan ah. Dhulalka ay soomaalidu degto, dad badan oo sheekooyin allakoodnimo ah laga soo weriyay ayaa jira. Ninka Ina Xaggaa Dheere wuxuu ahaa nin noocaasi aan kor ku soo sheegnay ah. Ina Xaggaa Dheere, wuxuu deganaa galbeedka Hargeysa, wuxuuna lahaa beero iyo waxoogaa adhi ah. Ina Xaggaa Dheere neefaf adhigiisi ka mid ah ayaa dhintay, markaasi ayuu go´aan ku gaadhay inaan adhigan(arigan), isaga iyo Illaahay u wada talin doonin. Ina Xaggaa Dheere, wuxuu sameeyay, adhigii ayuu laba qeybood u kala soocay. Wuxuuna yidhi: – Illaahayoow! adigaa qeybtaas u talin doona, aniguna waa igu qeybta kale. Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa adhigii uu Ina Xaggaa Dheere u soocay, inuu isagu u taliyo, neef ka sakaraaday, oo aad u jibaaday, sakaraadka awgiis. Arrintaas, aad iyo aad ayay ugu cadhaysiisay Ina Xaggaa Dheere, wuxuuna la soo cararay waran, wuxuuna ku rideeyay adhigii uu u soocay Illaahay. Wuxuu warankii ka mudhbaxay neef ka mid ah adhigii, oo halista gooyay. Markaasi ayay aad u qalaaday xannuun awgiis. – Cabaadka day! Ayuu yidhi Ina xaggaa Dheere, wuxuuna intaas ku daray weliba, isagoo hadalkiisii sii wata: – Bal adba day, kowaygii sida aad u gashay ! Maalin kalena, isagoo jooga meel ceel ah oo biyo uu doonayo inuu ka cabbo, ayaa Ina Xaggaa Dheere afkiisi uu ku dhegay dhagxantii ceelka oo uu hal cabaar ah ka soo fujin kari waayay. Ninkii Ina Xaggaa Dheere oo yaaban, ayaa haddana markii dambe ay kala foqeen dhagaxii iyo dibnihiisi. Waxaa la yidhi, muddo dhan ayuu Ina Xaggaa Dheere, Illaahay ka biqi jiray, oo joojiyay hawlihii allakoodnimada ahaa. Hase yeeshe, maalin maalmaha ka mid ah, ayaa adhigiisi ku soo badatay dhimashadii, oo uu tarabtarab u dhintay. Markaas, ayuu intuu iscabadhintii iyo iscelcelintii u adkaysan kari waayay, oodda ka qaaday hawlihiisi, oo uu hadlay, wuxuuna yidhi: HADDII AANU AAMUSNO, WAA NOO AAMUS BAAS, OO ADHIGAAS SIDAAS LAGA DEYN MAAYO, HADDII AANU HADALNANA, WAA AF- SALAX-KU-DHEGAYAGII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MAXAY KA NUUGTAA AMA KU NUUGTAA Erayadan kor ku qorani, iguna, waxay ka soo ifbaxeen sheeko dheer oo taariikh lagu la baxay. Waxayna u dhacday sidan: Waxaa la yidhi, beri ayaa waraabe ka soo dacwooday in sumacdiisi la xumeeyay, xan iyo war aan jirina laga faafiyay. Wuxuuna ku cowday, in lagu sheego dembiyo aanu qabin, islamarkaasna wixii xun oo dhanna lagu eedeeyo isaga. Wuxuu sheegtay, kuna dacwooday in aan aqoon fiican loo lahayn ee uu ka duwan yahay sida loo haysto iyo waxyaabaha lagu tilmaamayo. Waxyaabaha uu afka ku dhuftay, ee uu sheegay in lagu xanto, uuna doonayo in laga daayo, waxaa ka mid ahaa: Inaanu ahayn mid wax booba, oo xaraan cun ah ama amaanada aanu xijin karin. Markii waraabe la dhegaystay, ayaa waxa la go´aansaday in waraabe laga daayo eedeynta, islmarkaasna loo lala dhaqmo sida ummadda inteeda kale loo lala dhaqmo. Waxaase la damcay in waraabe la tijaabiyo. Waxaa lagu yidhi Waraabe: – Waraaboow! hadalkaaku waa gar iyo daw. Xaqna waad u leedahay in lagu aamino, balse waaba la hubsan dooneeye, ka bilow hawsha aad sumcaddaada ku hagaajinaysid ilaalinta hashan iyo nirigteeda yar ee ay dhashay. Ma laguugu yimid iyagoo bedqaba, mise, sida la sheegayo waxyeelo u geysatay hashaas iyo nirigteeda? Waraabe oo ka jawaabaya su´aashaas la waydiiyay, ayaa hadalkii dhexda ka kala jarayaya, ayaa yidhi: – Midba Iyadoo hadalkii la sii wado, waraabana loo sii ballaadhinayo ayaa loo kala qaaday labada arrimood ee is dhinac yaalay, waxaana lagu yidhi: – Haddii laguugu yimaado, iyagoo bedqaba, waxaa lagaa bedelayaa sumcadda xun daayoo, magaca, waxaana laguu bixinayaa “AAMIN”. Laakiin haddii loo yimaado, adigoo hashii iyo nirigteedi yarayd waxyeelo u geystay, waxaas lagaa sheegayaa, waraaboow! waa rune, waxba ha ka damqan, waa wax aad adigu geysataye. Waraabe, oo isku kalsooni ka muuqato, ayaa u xaqiijiyay inuu yahay mid aamin ah, oo wixii lagu aamino loogu imanaayo, iyagoo sidoodi ah, Amaano qaadkiisuna uu badan yahay. Wuxuu kale oo ku dardaarmay inaan shaki iyo werwer laga qabin, ee uu hashan iyo nirigteedaba, si fiican u sii maamuli doono. Markii laga tegay, ayuu waraabe wuxuu is adkeeyaba, is hayn kari waayay, wuxuuna goostay, in aanu ku fogaani hasha iyo nirigteeda, ee uu raadiyo hab waxna uu ku yara cuno, islamarkaasina aanay cid dareemi karin. Wuxuu fakiraba, wuxuu ku tashaday, inuu hasha ka goosto afarta naas oo keli ah. Waayo ayuu is yidhi: “cidi arki mayso naasaha.” Waxooga kale, haddii uu joogay, ayuu haddana u hamuumay inuu wax cuno. Markana isagoo ku shaqaynaya fikradiisii hore, ee ahayd inuu raadsado meel qarsoodi ah, oo aanay ishu ku dhacaynin, ayuu nirigtii yarayd farruuryaha ka goostay. Wakhti kadib ayaa waraabe loo yimid, waxaana lagu farxay in hashii iyo nirigteedii uu hayo, waxaana loo soo jeediyay ammaan fara badan iyo boggaadin. Waxaa waraabe lagu habbalyeeyay hawsha fiican ee uu qabtay. Iyadoo weli lagu jiro farxaddii iyo raynrayntii, ayaa la damcay in hashii la godlo. Markii uu waraabe arkay meesha xaal marayo, ogaadayna inaanu fakanaynin, ee sirtiisi ay soo baxayso, ayuu boobay hadalkii, wuxuuna yidhi, odhaahdan caanka noqday ee reebtay taariikhda iyo halhayska :” MAXAY KA NUUGTAA AMA KU NUUGTAA?” Xigmadda meesha ku jirtaa waxay tahay: Marka geela la soo gudlaayo, waxaa la yara jaqsiiyaa nirgaha, si ay caanuhu ugu soo dhacaan candhada. Markaas haddii aan meeshii jirinba naaso, oo candhadii naasihii laga goostay, godol ma dhici karo. Sidoo kale haddii ayna nirigtu lahayn farruuryo, iyaduna waxba ma jaqi karto, godolna ma dhici karo. Sidaas ayuu u jeeday waraabuhu. Waana la fahmay inuu sameeyay, wixii lagu sheegi jiray, wayna ku cadaatay, sidaas ayaa gartii ku dhammaatay in waraabe aan laga gar darayn ee uu isagu kasbaday sumcad xumida uu leeyahay. REER AAN OGAHAY MA GUURO Halkayskan, isna wuxuu ku baxay sheeko dheer, oo xikmad reebtay. Waxayna u dhacday sidan: Beri ayaa reer meel yaala ay dacawo soo gashay gurigoodi, waxayna ka cuntay yeeshii. Yeeshu waa xadhiga ugu muhiimsan xadhka la isticmaalo, marka aqalka miyaga lagu rarayo awrka. Yeesha la´aanteedna wax la rari karaa ma jiraan. Dacawadii reerkii kamay ag fogaanine, waxay u fadhiisatay duleedka. Markii reerkii isku soo wada laabtay habeenkii, ee ay xoolahoodina soo wada nabad xeraysteen, ayay ku tashadeen inay meeshan ka guuraan. Dacawadii oo maqlaysay doodda reerka iyo taladooda, ayaa intay qososhay, tidhi WALLEE REER AAN OGAHAY MA GUURO. BICIIDKA AAN DILI DOONO… Halhayskan, wuxuu isna ku baxay sheeko dheer, oo laga la hadhay xikmad. Beri ayaa waxaa meel ku noolaa nin ugaadhsade ah, wuxuuna qabay afo uur weyn u leh, oo ay aad iyo aad isu jeclaayeen. Ninka ugaadhsadaha ahi, wuxuu qaataa leeb iyo qaanso, wuxuuna soo dilaa ugaadha, ay ka mid yihiin biciid, deero, daba-taag, garanuug, goodir, geri gorayo, cawl, sakaaro, wiyil iyo wixii kale ee u gala dabinada uu dhigto. Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa intaanu gurigiisi ka ambabixin, afadiisi uu damcay inuu ka sii farxiyo, una soo bandhigo waxyaabo run ahaantii, qalbigiisa uu ku hayay, lana jeclaa inuu u sameeyo afadiisa. Sheeko dheer oo uu ku hindisoon jiray, dhex miiran jirtayna laabtiisa ayuu dibedda u soo wadhay afadiisi, wuxuuna ku yidhi: – Biciidka aan dili doono, yeesha aan ka jir doono, lacagta laga siiso doono, sabeenta aan ka iibin doono, sumalka ay dhali doonto, subaga badhideeda laga shiili doono, adiga ayaa dhalayee dhan. Markii uu intaas ku yidhi, ayay afadiisi, oo aad saygeeda u qaderisaa, ay ka xishootay inay subagga, iyadu horta cabto, waxayna door biday inuu isagu cabbo, waayo isaga ayaa ka hawl iyo dhibaato badan iyada, oo maalin oo dhan ku soo rafaada, inuu soo ugaadhiyo. Sidaas awgeed, ayay la noqotay inuu isagu u xaq leeyahay inuu ka hor cabbo. Waxayna ku tidhi: – Waar adiga ayaa gannayee dhan. (Gannaya waxaa weeye soo tooganaya ama soo dilaya ugaadha.) Sida sheekada lagu soo weriyay, dhowr goor ayaa midba midka kale, isagoo ku ixtiraamaya yidhi: – Adigaa dhalayee dhan! – adigaa gannayee dhan! Markii la ismari waayay, ayaa ninkii ugaadhsadaha ahaa, aad uga cadhooday, kana xumaaday inay afadiisa uurka lehayd, ku diiday subaggii uu la jecelaa inay isku nafaqayso ee uu u hibeeyay. Afadiina sidoo kale, waxay aad uga cadhootay, saygeeda, oo dhibaato iyo hawlo badani ay ka soo marto ugaadhsiga, inuu diido maamulka nafaqeynta ee ay u soo jeedinayso marwadiisu. Meeshaasi, ismaandhaaf jacayl ku salaysan oo laxaad leh, ayaa ka yimid, oo maalintaas reerkii waxaa dhexmaray isafgaran-waa iyo kala cadhoodh ay aad u kala xanaaqeen. Laakiin xigmadda meesha ku jirtaa, waxay tahay, biciidkii weli lama soo dilin, wax subag ah oo labadooda dhex yaalay ma jirin! Weli biciidkii kanta ayuu dhex daaqayaa, gacantooda weli ma soo gelin. Weli saantiisi yeel lagama jarin. Weli wax lacagah oo yeel laga helay ma jirto, weli sabeen adhi ah lama soo iibin, weli sumal dhashay ma jiro. Weli badhi sumal lama shiilin. weli subag lama hayo. Bal arrintaas adigu! ka waran? SOOMAALIYEEY MUUSE WAA KAAS Halhaysadii xigmadda iyo taariikhda reebay ayaynu weli ku guda jirnaa, halhaysanina waa mid ka mid ah kuwa aad u caanbaxay, kuna yimid sheeko xaqiiqo ah oo dhacday, waxayna ku timid sidan: Soomaalidu waxay leedahay, weligeedna lahaan jirtay xukun dhaqameed. Xukun dhaqameed, waxaa weeye nidaam ay soomaalidu dejisatay, oo ay isku xukunto iyadu, iyadoo raacaysa dhaqankeed. Soomaalida dhaqankeeda waxaa sal u aha reer miyinimo ama reer guuraanimo. Sidaas awgeed, intaanu inoo iman gumaystuhu, iyo intii aynaan hanan dawladnimadii ka dambaysay 1960:kii, waxaa taabogal weyn lahaa nidaamkan xukun dhaqameedka ah. Inkasta, oo markii dawladnimada la hantay, iyo xilligii aynu gumaysiga ku hoos jirnayba, uu xukun dhaqameedku dawr weyn la siiyay oo maamulka la shaqeyn jiray, welina maantadan aanu joognana uu shaqeeyo. Haddana, wakhtiga uu ugu xoogga weynaa, ugna tamarta badanaa waa waayadii hore ee ayna jirin maamullo kale oo la tartamaa ama barbar socdaa. Beel kasta oo soomaaliyeed oo meel degani, waxay samaysataa nidaam ay isku xukunto. Waad maqashay ayaan filayaa, suldaanno, caaqillo, boqorro, ugaasyo, garaaddo, malaaqyo iwm… Kuwaasi ayaa la yidhaahdaa xukun dhaqameed iyo nidaamka ay wax ku xukumaan. Iyaka ayaa dadku haddii ay is qabtaan kala saari jiray, iyaka ayaa sharciga iyo xeerarka ilaalin jiray, islamarkaasina dejin jiray kuwo cusub. Iyaka ayaa la siin jiray waxa la yidhaahdo “sado”, oo u dhignta cashuur. Iyakuna dadka ay maamulaan waxay ballan qaadi jireen inay ilaaliyaan amaanka naftooda, sharaftooda, maalkoodaba iyo deegaankoodaba (ceel iyo dhulka daaqsinta ee ay beeshu leedahay.) Dadka xukun dhaqameedka madaxda ka noqonaya, had iyo jeer waxaa lagu soo dooran jiray xigmad, aqoon iyo hibooyin dheeraad ah oo ay dadka dheer yihiin. Sheekadani sida ay ku baxday: Nin ka mid ah madaxda xukun dhaqameedkaas, ayaa geeriyooday, waxaana sharci ah, intaan la aasin maydkiisa, in kii bedeli lahaa, horta la caleemo saaro. Inta badan, xukun dhaqameedka waa la kala dhaxlaa, oo madaxa dhintay, wiilashiisa ayaa jagadiisa ku fadhiista, iyagoo raacaya, sida ay u kala waaweyn yihiin. Habkaasi, ayay ku socotaa, sida caadiga ah, haddii aan la waayay wax wiilal ah oo uu ka tegay ninka dhintay, reerkii uu madaxu ka dhintay, uun bay u ekaataa Madaxnimadu. Sida la ogyahay, dadka meel wada yaallaa waa isyaqaanin. Dadka la mamulayaana, aad iyo aad ayay ula socdaa, madaxa dhaqameedka iyo carruurtiisa.Waayo mustaqbalkooda ayay khusayn doonaan. Waxaa la yidhi: Beri ayaa nin madaxa ka ahaa xukun dhaqameed beel soomaaliyeed uu dhintay. Geedkii ayaa la isugu tegay, si loo diyaariyo boqorkii cusbaa ee bedeli lahaa kan dhintay, kadibna loo caleemo saari lahaa. Niman ka mid ah beesha oo ninkan cusub ee la doonayo in la caleema saaro xoog u yiqiinay, doonayna inaan isaga la caleema saarin, inkasta oo uu ahaa, midka xaqa u leh, in la caleemo saaro, ayaa waxay dabareen khidad, ay doonayaan, inay si dadban dadka wax caleema saaraya, ugu muujiyaan, inaan ninkani u qalmi jagada xukunka. Waxay sii diyaariyeen wiil yar, oo ay u soo dhiibeen daasad ay ku jirto wasakhi. Waxayna u sheegeen wiilka yar inuu ku daadiyo wasakhdaasi boqorka cusub, intaan la caleema saarin. Wiilkii yaraa, sidii lagu yidhi ayuu yeelay, boqorkii cusbaa, markii uu geedkii yimid, isagoo la gelbinaayo, ayuu wiilkii yaraa, oo ku dhex jiray dadkii soo dhawaynayay boqor-sugaha cusub kaga saydhiyay wasakhdii uu daasadda ku siday, marihii quruxda badnaa ee uu gashanaa, kana dhigay maryihii oo dhan wada wasakh. Boqor-sugihii isagoo aad u cadhaysan, kana xanaaqsan wiilka yari waxaa uu ku sameeyay, ayuu dhenged dheer oo uu siday dabada u qabtay wiilkii yaraa, oo la dhacay. Nimankii sii khidadeeyay arrinta, oo sugayay bal sida wax u dhacaan , ayaa shirkii intay isdhextaageen yidhi: “SOOMAALIYEEY MUUSE WAA KAAS !!” Sidaas ayaa dadkii geedka joogay ay u la fahmeen wixii ay sheegayeen, isla goobtiina lagu boqray nin kale oo ka dulqaad badan, halhaykanna lagu bixiyay, ninkii odayga ahaana, lagu waa siiyay jagadii uu aabbihii uga dhintay ee uu dhaxalka u lahaa. Boqorkii oo dheged la dhacaya wiil yar Soomaaliyeey Muuse waa kaas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SAADAMBAAD GARAN! Halhayskan waxaa bixiyay nin magaciisa la yidhaahdo Dhalin Ileeye, oo ku noolaan jiray degmooyinka koonfur ka xiga magaalada Hargeysa. Dhalin Ileeye, wuxuu ahaa nin aad uga qosliya dadka, hadalladiisu ay xigmadi ka hadho. Waxa jirtay in had iyo goor ay soomaalida beelaheeda ay dhex mari jirtay dagaallo iyo collaadi. Waxaa la yidhi: Dhalin beeshiisi ay go’ aansatay in weerar ku qaado beeshii Dhalin Ileeye hooyadiis ka dhalatay ee reer abtiga u ahayd. Arrintaas Dhalin Ileeye ma jeclaysan, wuxuuna ku dhaqaaqay inuu wax ka qabto, intaan duulaan kedis ah lagu qaadin reer abtigii. Dhalin Ileeye wuxuu u tegay reer abtigiis, wuxuuna watay faras. Waxay reer abtigiis ka yaabeen waxa uu dhalin maanta u socdo ee uu doonayo. Iyagoo ka hor ka wareegaya,doonayana inay ka soo ridaan Dhalin Ileeye waxa uu muraadkiisu yahay ee uu u socday, ayay ku tuureen hadal kaftan ah, waxayna ku yidhaahdeen: – Dhalinoow! abti faras xumidee? Dhalin Ileeye, isagoo arrintaasi, isaguna kaftan kale kaga jawaabaya, ayuu ku yidhi: – Saadambaad garan!!! Sidaas ayuu reer abtigiis ku fahamsiiyay in saadame uu jiro dagaal ban oo lagu damacsan yahay in lagu soo qaado, kuna siiyay digniin, inay dagaalka ka sii diyaar garoobaan. Xigmadda meesha ku jirtaa, waxay tahay inuu Dhalin Ileeya, marna jeclayn in beesha reer abtigiisa ah ay beeshiisu gaadhsiiyo khasaare, waayo labada beelood ee ay aabbihiis iyo hooyadiis ka soo jeedaanba, wuxuu u arkayay inay isugu mid yihiin. Arrimaha kale ee Dhalin Ileeye laga hayo, waxaa ka mid ah: Wallaahi haddii aynaan karintaas ka guurin in gorayo heeraysan lagu arki! Hadalkaas, waxaa ku yidhi beeshii uu dhex noolaa Dhalin Ileeye. Laakiin dhab umay qaadan, wuxuu uga jeedayna may fahmin. Waxaa la yidhi: muddo kadib ayay goryo is tidhi, aqal soomaali dhexdiisa biyo yaalla ka cab, markii ay luquntii dheerayd aqalkii dhex gelisay ayuu aqal soomaaligu ku dumay. Markaasu korka ka saarmay. Gorayadiina waxay damacday inay iska tuurto, waase ka dhici waayay. Gorayadii oo ordaysa ayaa meeshii dadku joogay soo martay. Inta aad loo qoslay ayaa la yidhi: – Waa wixii uu Dhalin Ileeye sheegayay. Waa taas goryo heeraysani inagu soo martay ee meesha inaga rara. Immika wixii lala yaababa waxaa la yidhaahdaa: Wallaahi haddii aynaan meeshan iskaga tegin inaynu wax kasta ku arki. Waa sida halhayska ay reer Xamarku ka yidhaahdaan: Cimrigaa dheeraadaa geel dhalaaya waa ku tusaa! War odayaal ha gurina ee wax garad gura! Odhaahdani waxay ku baxday sidan: Sida aad la socotid, waxaa dhaqanka soomaalida ka mid ah in arrimaha iyo maamulka beelaha soomaaliyeed lagu gooyin jiray geedka shirka. Kaasi oo ay isugu imaan jireen wax alla wixii rag ah ee ay beeshu leedahay ee ka weyn 16 jir. Waxaa la ydhi maalin maalmaha ka mid ah ayay odayaashii is soo baxeen, waxayna gurfaynayeen arrin aad u adkaatay oo loo maaro waayay, markii ay soo gabagabaynayeen ayay waxay goosteen in arrinta guddi gooni ah loo saaro, ee aan lagu sii wadin shir weynaha dhexdiisa. Waxaa lagu tiraabay in odayaal la guro. Wiil yar oo geedka lagu shiraayo korkiisa fuushanaa, hase yeeshe, aan ka qeybqaadan doodda shirka, laakiise dhegaystay dhammaanteed, ayaa hadlay oo yidhi: ” Waar odayaal ha gurine, waxgarad gura”. Dadkii shirka joogay oo dhan, ayaa hadalkii inanka yar u bogay, runtiina la yaabay aqoonta iyo xigmad ka soo yeedhay wiilka yar. Waxaa ku dhacay dhammaan ka soo qeybgalayaashii shir amakaag, waxaana lagu amray wiilkii yaraa bal inuu soo dego, wixii uu yidhina ku celiyo mar kale. Sidii uu markii horeba yidhi ayuu mar labaad ku yidhi: ” Waar odayaal ha gurine, waxgarad gura”. Wiilkaasi yari markuu weynaaday wuxuu noqday madax sare, oo ka mid ah madaxdii ugu caansanaatay madax dhaqameedka soomaaliyeed. Wuxuu noqday Suldaan ka mid ah suldaanada beelaha soomaaliyeed. Magaciisa waxaa la odhan jiray Suldaan Diiriye. Suldaan Diiriye wuxuu madax u noqday beel degta Burco iyo nawaaxigeeda. Wuxuu caan ku noqday geesino, aqoon iyo xeerdejin ku saleysan caddaalad dadka oo dhami u semanyahay. Waxaa la yidhi dhammaan xeerarka beeshaasi ku dhaqanto hadda, aasaaskooda waxaa dejiyay Suldaan Diiriye. Wax kasta oo dhici kara ama dhacay wuxuu u sameeyay xeer. Waxaa la yidhi : Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa niman geelashii meel fog u kaxeeyeen, oo aad uga durugsan meeshii beeshu ay deganayd. Waxaa la yidhi, waxaa dhimatay hal ka mid ah geeli. Hasha mulkilaheedi waa uu maqnaa. Nimankii geela hayay, ayaa isku qabtay in hasha hilibkeeda la raro oo reerihii iyo mulkilhii loo geeyo iyo in aan waxba loo geynine ay iska cunaan iyaku. Way ku dhici waayay in hasha hilibkeedii cunaan, iyagoo aan fasax iyo idin ka haysan mulkilihii hasha lahaa, waxay ka baqdeen in deyn loo raaco. Sidaas awgeed, waxay cid u dirteen Suldaankii, si loo waydiiyo talo iyo iftiimin arrintaas ku saabsan, si uu uga soo siiyo. Waayo dhibaatooyin badan ayaa ka yimaada geel iyo arrinkiisa. Sidaas darteed ayay u su´aaleen suldaanka: Haddii ay hal dhimato, ninkii lahaana aanu joogin, hilibkeedu ma deyn buu ku noqon doonayaa geeljiraha, mise kuma noqonayo? Suldaan Diiriye wuxuu arrintaas kaga jawaabay: Raqba waa ku raggeeda. Cidii goobjoog ah, ayuun baa cunaysa wixii si bes ah ama lama filaan u dhinta, hilib loo soo rarayaa qof maqan ma jiro, wax dayn ah, oo uu xaq ugu yeelan karaana ma jirto, ayuu ku dejiyay xeer. Ma waxaan ku mooday, mise waxay noqotay, mise waxaan loo noqon doonin Odhaahdan waxaa bixiyay ninka sheekooyinka soomaaliyeed caanka ku ah ee la yidhaahdo: Cigaal Shiidaad. Sida uu ku bixiyay halhayskana waxay ahayd sidan: Sida aad sheekooyinka kaga dheregsan tihiin, Cigaal Shiidaad, wuxuu ahaa nin lagu saliday baqdin iyo fulaynimo, wuxuuna ka didi jiray hadhkiisa. Waxaa looga soo joogay, ama laga weriyay dhacdooyin badan oo Cigaal Shiidaad la soo gudboonaaday, dareenkii uu ka bixiyayna ay reebeen halhaysyo hadhi waayay oo xigmad leh. Dhowr ka mid ah ayaynu halkan ku soo qaadaynaa: Waxaa la yidhi Cigaal Shiidaad ayaa habeen habeenada ka mid ah damcay inuu socdaallo. Cabbaar markii uu socday, ayaa gudcurkii dumay, waxayna noqotay madoow dam ah.Wuxuu arkay kortin meel ka taagan. Kortin waa geed jabay ama la gooyay qeyb ka mid ah oo dhulka ku hadhay. Kortinkii ayuu u maleeyay bahal. Wax buu ku tuurtuur, laakiin waa dhaqaaqi waayay. Cigaal Shiidaad wuxuu goostay in aanu meeshiisa ka dhaqaaqin oo uu bahalka kolba wax ku tuuro, kuna qeyliyo, illaa waagu ka beryaayo ama ay cidi u soo gurmanayso ama uu bahalku meesha ka tegaayo. Sidii ayuu yeelay. Markii uu waaggii beryay, ayuu arkay Cigaal Shiidaad in wixii uu xalay oo dhan ka baqanayay uu ahaa kortin. Cigaal Shiidaad, isagoo ka faa´iidaysanaya dhacdadaasi la kulantay, cashar nololeedna ka qaadanaya, ayuu odhaahdiisan caanka noqotay yidhi: – Ma waxaan ku moodayay, mise waxaad noqoto, mise waxaan loo noqon doonin. Isagoo Cigaal Shiidaad ka jawaab bixinaya odhaahdiisi, ayuu yidhi: – Waxaan ku moodayay bahal, waxaadse noqotay kurtin, waxaase loo noqon doonin guure habeenimo Xigmadaha Cigaal Shiidaad laga reebay intaas kuma eka, waxa uu Cigaal Shiidaad af soomaaliga ku soo kordhiyay odhaaho badan. Bal haddana aan qaadano mid kale oo ka mid ah, hadallada laga reebay Cigaal Shiidaad. Waxaa la yidhi habeen habeenada ka mid ah, ayaa Cigaal Shiidaad, oo hurda meel ardaa ah, ayaa subxaanyo, soo dul martay sanka iyo afkiisa dhexdooda, dibintiisa sare korkeeda. Qabowgeedii subxaanyada iyo dareenkii Cigaal ee baqdinta badnaa ayuu ku toosay. Cigaal wuxuu billaabay qeylo iyo oohin dheer. Taasi oo dadkii kale ee ag hurdayna ku wada tooseen. Markii la isu soo wada kacay, ayaa la arkay in wuxuba ay subxaanyo yihiin. Cigaal Shiidaad, waxaa loo sheegay, inayna subxaanyadu, waxba cunin, halisna lahayn ee uu iska aamuso, iskana seexdo. Laakiin Cigaal Shiidaad ma aamusin, ee qeyladii iyo oohintii ayuu sii watay. Dadkii kale ayaa fahmi waayay sababta uu Cigaal Shiidaad la ooyayo, maadaama, subxaanyadiina laga dul qaaday, loona sheegay inaanay wax cunin, dhibaatana cid u geysan. Cigaal Shiidaad oo ka jawaabayay su´aalaha dadka, ayaa halhays caan noqday ku yidhi: Waxaan ka baqayaa inay meeshaasu noqoto waddo halaq! Waxay tahay xigmadda meesha ku jirtaa, maadaama ay subxaanayba soo mari kartay, in halaqa laayaanka ahna soo mari karo. Halaquna waa maska ugu qatarta badan masaska, ee la yidhi wuxuu ku hanjabay: Qofka aan qaniino haddii uu yidhaah waa la i qaniinay, anigu ma qaniinin. Micnihii marka uu wax qaniino halaqu, islamarkaasba naftu qofkaasi way ka baxdaa. Aad ayaa looga baqdaa halaqa. Markaas Cigaal wuxuu ka baqday, haddiiba ay subxaanyo, soo martay maanta, beritana inuu halaq soo maro. Laba walba isa saaro, laba tagoogo isma saarin! Odhaahdan waa mid xigmad weyn ku fadhida, waxayna ku baxday sheeko dhacday. Waxayna u dhacday sidan: Sida aad la socotaan reer guuraagu, inta badan waxay cunaan wixii ka soo go´a xoolahooda, inta badanse, waxay shidhaystaan mar mar iyo dhif. Waayo xoolaha mar kasta haddii la qasho, way dabar go´ayaan. Waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaa reer qashay laba neef subaxnimadii, intii aan xooluhu kala dareerin. Wiilkii adhiga raacayay, ayaa hooyadeed u sii ballan qaaday inay u dhigi doonto cad oo hilib ah oo ka mid ah neefka qoyskoodu qasheen. Sidoo kale ayaa abtigiisa u ballan qaaday inuu isna u dhigi doono cid kale, oo ka mid ah neefka abtiyo qoyskoodu qasheen. Wiilkii maalintii oo dhan ayuu hadba qiyaasayay bal labada cad ee loo sii dhigiyaayo kuwa ay noqon karayaan. Kolba laba ka mid ah hilibka labada neefka ayuu isa saaraa: – Ma garab iyo awlal, ma jeeni iyo awlal mise dhabar iyo awlal, ma dhabar iyo misig ma misig iyo jeeni, mise jeeni iyo awlal, mise sakaar iyo awlal, mise badhi iyo awlal, ma luqun iyo dhabar iwm… Maalintii oo dhan ayuu ku jirtay xisaabin. Markii uu gurigii yimid ayaa waxaa loo soo dhigay laba tagoogood. Tagoog waa lugta meesha ugu hoosaysa, laga billaabo qoobka ilaa laga gaadhayo shanshada. Arrintaasi, waxay ku noqotay filan waayo iyo fajac, in labadii neef dhammaa ee ay labada qoys kala qasheen, iyagoo, tirsanayay iinuu reerkaba ugu hawl badnaa, la siiyo laba tagoogo. Sidaas ayay ku bixisay odhaahdan ah: – Laba walba isa saaray oo laba tagoogo isma saarin. Xigmadda meesha ku jirtaa waxay tahay: Wax kasta waan filayay laakiin taas maan filanaynin. Nin hooyadiina u tu’iyoo, walaaloow wuxuu ku dhaamo ma leh! Odhaahdan, waxaa laga hayaa ninka madax dhaqameedka ahaa oo caanka ahaa, lana odhan jiray Wiil Waal. Wiil Waal wuxuu madax dhaqameed u ahaa beel soomaaliyeed oo degta nawaaxiga Jigjiga. Wiil Waal sheekooyin badan ayaa laga soo tebiyay, wuxuuna ahaa nin geesinimo, garaad dheeri, deeqsinimo iyo af tahanimo ku caan ahaa. Laakiin intii uu madaxda ka ahaa beeshiis, Wiil Waal dad badan oo sokeeye iyo shisheeyaba leh, ay colaatameen, oo waxyaabo badan oo ba’ an oo xumaato lehi dhexmartay, sida ka muuqata odhaahdiisan. Wuxuuna lahaa awood badan oo aan xad lahayn. Waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid ah, oo ay beeshii uu Wiil Waal madaxda u ahaa, ay guurayso, ayuu seexday badhtanka waddadii Kaara mardho, oo ah jid buur laga dhex dhisay, oo cidhiidhi ah. Waxay beeshii oo dhan ku keliftay inay istaagaan, oo sugaan inta uu ka kacayo. Waxaana la iska waayay cid ku dhiirata Wiil Waal, oo tidhaahda: – Noo bannee waddada, aanu maree. Nin awooddiisu heerkaas gaadhsiisan tahay ayuu ahaa. Odhaahdan Wiil Waal, laga hayaa, waxay ina tusaysaa, in awood uu u lahaa, inuu qof ku saman karayay wax ugu xun ee qof lagu sameeyo. Taasoo ah in hooyadii loo tu’iyo ama loo guuriyo. Xad ka hooseeya oo qof binu aadami ah lagu samayn karaa ma jiro. Xigmadda meesha ku jirtaa, waxay tahay: Dhibaatada qof lagu sameeya, wuxuun bay keenaysaa, dhibaato kale, oo aanad ka sii fakirayn inuu kugu sameeyo isaguna. Markaas wuxuu Wiil Waal yidhi: Walaalnimo inay dadka idin dhexmarto oo lagu la dhaqmo wax ka fiicani ma jirto. Wixii ka duwan walaaltinimo, isqaderin, is-ixtiraam ku wada noolaasho, khasaari uun baa kaga imanaya, inkasta oo aad istidhaahid waad ka guulaysatay, ama waad ka libaysatay, haddana guul lagaga dambeeya guul kuuma aha.Sida odhaahda kale ee soomaaliyeed tidhaahdo : “Nin, nin ka dambeeyaa kabtiis ma yeelna” Waa odhaah ku timid waayo-arag. Halhaysyada Wiil Waal laga reebay intaas kuma dhamma, bal haddana aan mid kale oo xigmad huwan, oo uu Wiil Waal reebay aan soo qaadano: Waxaa la yidh: Wiil Waal ayaa isugu yeedhay dhammaan raggii beeshii uu madaxa ka ahaa, wuxuuna soo fadhiisiyay geedkii la isugu soo bixi jiray marka ay jirto maaraynta arrimaha beeshu. Wiil Waal wuxuu ku amray raggii beesha inay u keenaan cadka ka mid ah hilibka oo ah midka rag isku raaco, wuxuuna u ballan qaaday abaalgud ciddii ku guulaysata soo helidda cadkaasi. Raggii ayaa ku soo laabtay guryahoodi, iyagoo ku fakirayay sidii ay cidkaasi uu sheegay Wiil Waal u soo heli lahaayeen. Qaarba malihii meel ayay ku dhufteen ay u malaynayeen. Qaar waxay soo jeediyeen, oo la toosnaatay in garabku yahay hilib had iyo jeer ragga lagu soor, laguna xurmeeyo. Qaar kale waxay tilmaameen awlallada oo ah cad aad u macaan ragguna jecelyihiin. Nin waliba neef ayuu qalay, wuxuuna afadiisi u sheegay in cadka hebel ay kolay ugu rido, markii ay waydiisay, waxa uu cadka ku falayana, wuxuu uga sheekeeyay arrinta uu Wiil Waal ka dalbaday ragga beesha oo dhan. Ragga beesha waxaa ku jiray oday, iska ah sabool. Sidiisa isaga af gaaban. Sideedabana Soomaalidu, waxay ku qaderisaa dadka hadba inta hantidiisu leegtahay. Ninkaasi bulshada dhexdeeda, wuxuu ka ahaa nin aan sidaas uga muuqan. Waxaa intaas u sii dheeraa, inuu lahaa carruur badan, oo wada hablo ah. Taasoo ay bulshadu si kale u arki jirtay. Odaygii markuu shirka iyo geedka ka soo laabto, wuxuu caado u lahaa inuu xubnaha qoyskiisa uga sheekeeyo arrimaha lagu soo qaaday geedka iyo shirka, si laab furanna uga la sheekaysto. Amarkii Wiil Waal markii ay ka sheekaysteen, ayaa gabadh uu dhalay, ayay u sheegtay inay garanayso, waxa uu Wiil Waal u jeedo. Sidaas awgeed ayay ka codsatay aabbaheed inuu neef qalo. Odaygii, oo marka horeba iska danyar ahaa, islmarkaasna, aan doonaynin in Wiil Waal iyo ragga kale ee beesha horteeda inaan lagu ceebayn, ayaa inantiisi ka diiday soo jeedinteedi. Laakiin inantii kamay hadhin ee dhinaca hooyo iyo hablahoodi kale ayay ka martay, waxay kuligoo isku raaceen in la tijaabiyo bal waxan ay sheegayso, lana geeyo cadkan ay tilmaantay. Odaygii, isaga oon rumaysnay, kuna qanacsanay inantiisa rayigeeda, ayuu qalay neefkii, waxayna inantii soo gooysay hunguri. Odaygii markuu arkay cadka ay inantiisu soo goosay, ayaaba baqdintiisi ka sii farabadatay intii hore. Si kastaba, ha ahaate, wuxuu soo qaaday cadkii ay inantiisu soo meedhay, isagoo caga-jiidaya, wuxuuna dhigay meel loogu talogalay cadadkii la soo ururiyay ee ay keeneen ragga beesho, waxaana la isdaba taxay kolayo fara badan. Wiil Waal, xilligii uu dadka ballamiyay in lagu keeno cadka rag isku raacay, markii la gaadhay, ee raggii beesha aanay cid maqani jirin, ayuu billaabay inuu eego kolay kasta waxaa ku jira. Kolba mid ayaa loo keenaa, markaasu waydiiyaa: Kolaygan yaa leh? Qofkii lahaa ayaa intuu istaago, sheega magaciisa. Mid kasta waxaa loo sheegaa inuu saxay iyo inuu khalday. Ilaa intii laga soo gaadhayay kolaygii odayga, wax sax helay ma jirin. Markii kolaygii odayga la soo qaaday, lana waydiiyay cidda leh, ayaa odaygii oo baqdin iyo naxdin la kurbanayaa sheegay magaciisa. Wuxuuna hiifayay inantiisa, oo uu ku eedaynayay in maanta waxa gaadhaba ayay iyadu ka masuul tahay.”Inkaar Qabtadu”, waa sida uu afkiisu hoos u lahaaye. Wiil Waal markii uu eegay cadka ku dhex jira kolayga odayga, ayuu odaygii si aan caadi ahayn u eegay, wuxuuna waydiiyay mar kale: Ma adiga ayaa keenay cadkan? Odaygii ayaa baqdin awgeed, iska qirtay in ay inantiisu, ku keliftay inuu soo qaado cadkaasi. Wiil Waal ayaa amar ku bixiyay in inantaasi loo yeedho. Sidii ayaa la yeelay, inantiina waxaa la waydiiyay sababta ay cadkan ugu dooratay inuu yahay cadka rag isku raacay. Waxayna sheegtay, in rag waxaa walaaleeyaa uu yahay “HUNGURI”. Sidaas ayay ku baxday xigmadda ah : Cadka rag isku raacay ha la ii keeno!! Sheekadu, waxay intaas ku sii dartay, in inantii caqliga badnayd, ee raggii beesha oo dhan tartanka tijaabada helitaanka xigmaddaasi ka badisay uu guursaday Wiil Waal, reerkii saboolka ahaa ee odaygna uu siiyay xoolo iyo hanti badan oo aan la koobi karayn. Sidaasna ay ku noqdeen reer Hodan ah oo la tixgeliyo, marka maaraynta arrimaha bulshada laga hadlaayo. Iska hadloow Ina Higare! Odhaahdan waxaa laga hayaa qof dumar ah oo soomaaliyeed, in kasta oo aan magaceeda la garanaynin. Waxayna ku soo baxday sidan: Ina Higare wuxuu ahaa nin ku dhashay gobolka mudug, waxna ku bartay dalka Hindiya, muddadii Ingriisku uu xukumayay Hindiya. Maadaama ay dawladda Ingriisku ay dhulka Soomaalida qeyb ka mid ahna ay xukumaysay, waxay u baahnay dad soomaali ah, oo wax bartay, kana kaalmeeya xagga maamulka dhulka soomaaliyeed ee xukunkeeda ku hoos jiray. Sidaas ayaa dawladda Ingriisku ku soo shaqaalaysay Ina Higare, una keentay magaalada Burco. Ina Higare wuxuu ka noqday madax sare Maxmiyaddii Soomaaliyeed ee Ingriisku xukumayay, ee loo yaqaanay “British Somaliland”, markii dambena loo bixiyay gobollada waqooyi ee Soomaaliya, maanta loo yaqaan “Somaliland” . Xilligaas Ina Higare, uu lataliyaha u ahaa maamulkii Ingriiska, wuxuu siin jiray talooyin , ku saabsan, waxyaabo badan oo aanu Ingriisku fahmi karayn. Waxyaabaha uu sharciga u dejiyay Ina Higare, waxaa ka mid ah in cashuur la bixiyo, taasoo dadka Soomaalieed ku cusbayd. Haddaba sida ay odhaahdani ku baxday, waxaa la yidhi: Markii ay qoftan dumarka ahi, ay dhegaysatay talooyinka Ina Higar iyo Ingriisku soo jeedinayeen, ayay aad uga yaabtay, waxayna tidhi odhaahdan caanka noqotay ee ah: – Iska hadloow Ina Higare! Xeerba waa xeer, oo waa xabag cadaadeed… Odhaahdan, oo ah hees gaaban oo afaray nooca loo yaqaan ah, waxaa tiriyay wiil yar oo soomaaliyeed, oo geeljire ah. Wuxuuna u tiriyay saaxiibkiis, oo ay geela la wada joogeen. Intii geelu u daaqayay, ayay xabag doonteen. Waxaa dhacday haddaba, in wiilkii kale helay xabag weyn ka hor helay, islamarkaasna, uu u diiday inuu wax ka siiyo. Markaasi ayaa saaxiibkii wax loo diiday, isagoo cadhaysan, tiriyay midhaha heestan, oo uu ku sheegayo xigmad weyn oo ah : In xeerka uu hadda dhigto, isna hadhow uu kula dhaqmi doono, wuxuna sideedaba ay cunto tahay, wuxuuna yidhi: xeerba waa xeer, oo waa xabag cadaadeed, oo waa la xaari doonaa!!!! Xigmadda meesha ku jirtaa, waxay tahay: in wax aan qiimo weyn sidaas u sii lahayn, aydaan saaxiibkaa ku kala dhimayn ama isku nicin.Waxaa ka weyn xabagta saaxiibnimada iyo weliba, midda kale, in nabsigu isdaba socdo, oo maanta, haddii aad adigu, hor heshay, hadhowna wuu saaxiibkaa hor heli doono xabagta. Markaasna uu ku marin doono xeerkii aad sii dhigayteen. Tan ayay ku salaysan tahay, wax-isa-siinta Soomaalidu. Qof walba xeerka aad u dhigato, ayuun buu hadhow kugu dhaqayaa. Waana ta Soomaalidu tidhaah: “Xoolahaagu ama xero ha kuugu jiraan, ama xeer ha kaaga maqnaadaan”. MA ANIGAA KEENAY SUDAANTA Halhaysan kor ku xusani, wuxuu ka mid yahay, halhaysada aadka loo xigto, ee ku dhashay dhacdo xaqiiqo ah, kadibna, noqday halhays ma hadho reebay. Haddaba sidii uu ku baxay halhaysani waa sidan: Waxaa jirtay 60naad:kii inay Soomaalidu xiiso weyn u haysay fanka iyo heesaha Sudaanta, ee wadanka Sudaaan. Waxa aad loo dhegaysan jiray fanaaniinta waaweyn ee dalka Sudaan, ee ay ka mid yahay: Maxamed Alwerdi, Saalax Al ibnal Khaliif Al-baadiya, Albalaabil oo ahaa laba hablood iyo qaar kale oo badan. Heesihii aad looga xiisayn jiray, waxaa ka mid ahaa, kuwa uu qaadi jiray Maxamed Alwardi ee “Cumaral Suhuur” “Ashraqal Subxu” iyo kuwii uu qaadiri jiray Saalax Al Ibna Khaliif Al-baadiya ee ay ka mid ahaayeen : “Muddo Badan maanan idin arag” oo uu af Soomaali ku qaadi jiray, “Cabuud wa Aadan Cabdalla”, oo loo tiriyay labada madaxweyne ee dalalka Sudaan iyo Soomaaliya. Waxaa iyana aad loogu riyaaqi jiray cododka dahabiga ee hablaha “Albalaabil”. Dhinaca kale Sudaaniyiintu, waxay iyana aad uga heli jireen fanaaniinta Soomaaliyeed, waxayna aad u dhegaysan jireen codka dahabiga ee fanaanada weyn ee Soomaaliyeed Xaliimo Khaliif “Magool”. Waxay codkiisa isna ku raaxaysan jireen, oo si weyn Sudaan looga dabadhacay Maxamed Suleymaan “Tubeec” iyo fanaaniin kale oo badan oo ay ka mid tahay Khadiija Qalanjo. Waxay labada wadan iswaydaarsan jireen booqashooyin iyo socdaallo fanneed, oo ay labada dal ku kala tegi jireen kooxo ka tirsan fanaaniintu, kana soo bandhigi jireen masraxiyado. Haddaba, sida ay ku dhacday dhacdadan, aynu ka hadlaynaa, waxay ahayd ayaa la yidhi: In fannaaniinta reer Sudaan oo oodahoodu iyo dhigahoodi wataa ay booqasho ku yimaadeen dalka Soomaaliya, oo ay soo mareen magaalomadaxda kowaad iyo tan labaad. Markii ay yimaadeen magaalada Hargeysa, waxay ka tumeen xarunta weyn ee beerta Xoriyada. Halkaasi oo dadweynihii reer Hargeysa isugu soo baxeen, oo meel la kala fadhiisto la waayay. Waxaana fannaaniinta lagu qubay waxyaabo badan oo lagu muujinayay jacaylka loo qabo. Gabadh ka mid ahayd dadweynaha xiisaha weyn u haya Suudaanta iyo fankooda ayaa, marka ay waxoogaa joogtaba, fannaaniintii reer Sudaanta mid ka mid ah inta ay kacdo, sudhaa dahab ka mid ah dahabkeedii badnaa ee ay isku soo sharaxday habaykaas qiimaha weyn la leh awgeed, Dhaqanka Soomaalida ee arrintaas ku abbaarani, wuxuu yahay: in fannaanka la siiyo saacad ama dahab, markuu heesta dhammeeysto, inuu si qarsoodi ah, ugu soo celiyo alaabtii la siiyay, dadkii siiyay. Laakiin Sudaantu, wixii lagu guddoonsiiyo meesha macfalka, indhaha kumayaalka qof hortood ee loogu deeqo, waxay u qaataan, wax aan waxba ka soo noqonaynin. Waa dhaqankooda. Waxaana la siiyaa marka ay heesayaad lacag wejiga lagaga dhejiyo ama jeebabka loogu guro. Sidoo kale saacaddo iyo wixii qaali ah ee ka soo gaadha dadka ay u heesayaanna sidaas ayay u qaataan, in la siiyay. Gabadhii dahabkii badnaa ee ay habeenkaas sudhay fanaantiinta reer Sudaan, haba yaraatee, wax kaga soo noqday ma jirin. Sidii ayay gurigeedii ku qabatay iyadoo ka fara madhan dahabkii badanaa ee ay xidhnayd. Qaar kaatunno ayay faraha u gelisay, qaar kalena waxay qoorta u sudhay Silisyo. Waxay garan wayday si ay seygeedi ugu sheegto, dhibaatada dhacday, waxayna isaka gaabsatay afkeedi. Mudo ka dib, ayuu waydiiyay seygeedi, waxaa ku dhacay dahabkeedii iyo meesha uu maray, waxayna ugu jawaabtay weedh gaaban, hase yeeshe, huwan xigmad iyo hawraar badan, taasi oo aan cidna ka daba hadlin ee ay arrintii ku xidhantahay. Waxay tidhi: – Ma anigaa Sudaanta keenay? !!!! Xigmadda meesha ku jirtaa waxay tahay: Khaladka anigu ma lihi ee waxaa iska leh, ciddii Sudaanta casuuntay. Hadda waxaa loo isticmaalaa weedhan su´aasha ah. Marka aad ka hadlayso wax awooddaada ka baxsan, oo aan lagugu canaanan karin. INA SANWEYNANA U GEE ! Eraydan dusha sare ku qorani, waxay ka mid yihiin weedho la isticmaalo, oo wax lagu la baxaayo, laakiin waxay ku yimaadeen sheeko dheer oo dhacday, kadibna ay ka dhalatay xigmad iyo odhaahdani. Bal haddaba aynu soo qaadanno sidii ay ku baxeen erayadani: Ina Sanweyne, wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed, oo aad iyo aad u caqli badan, aqoon weyna u leh xeerarka iyo garta Soomaaliyeed. Waxaa jirtay, inay Soomaalidu lahayd hab dhan oo xeerar ah oo u dejisan bulshada, sidii ay isu xukumi lahayd, laguna kala gar bixi lahaa. Marka khilaaf yimaado, waxaa la isla tegi jiray geedka iyo shirka ee may jirin wax maxkamado iyo qaadiyaal ihi waayadii hore. Maxkamad waxaa la sameeyay markii ay dawladnimo timid, ha ahaato tii gumeysiga ama kuwii kale ee Soomaaliyeed ee kala dambeeyay. Qaadi isna waa qofka wax ku xukuma diinta islaamka. Bulasha dhexdeedka waxaa ka soo bixi jiray niman ku noqda garta iyo kala saaridda dadka aqoonyahanno la isula yimaado. Sida ay sheekadani ku baxaday, waxaa la yidhi: waxaa jirtay gar adkaatay, oo markii la naqaba, racfaan laga qaato, oo meel kale iyo dad kale la isula tago. Waxay noqotay gar cid gooysa oo soo afjarta la waayay. Waxaa markii dambe loo keenay Ina Sanweyne. Ina Sanweyne si fudud oo loo qaadan waayay, ayuu gartii muddada dheer soo jiitamaysay u dhammeeyay, ugana faraxashay, iyadoo labadii dhinacba aad uga mafsuudeen, sida uu ku dhammeeyay garta. Arrintaasi warkeedi, dadkii Soomaaliyeed ee meel kasta yaalay ay uu ku dhex faafay, waxaana la isgaadhsiiyay in uu Ina Sanweyne yahay ninka Soomaaliyeed ee ugu gar yaqaansan. Marka ay rubato ama rakata, la isula tago ama la soo egmado. Egmasho waa mar qof laga dhigto afhayeen kuu doodda. Intii xilligaas ka dambysay, dadka Soomaaliyeed ee loo doorto Xeerbeyti, ee gar qaadaa, marka soo bandhigayaa go´aankooda ee soo gebagebeeyaa, ayaa waxay ku xidhaan hadalkooda: Waa sidaas go’aankayagii aannu soo gaadhnay. Waana gar saxa. Waxayna intaas ku daraan: – Ina Sanweynana u geeya !! Xigmadda meesha ku jirtaa waxay tahay: “Wax dambe oo gartaas ka imanayaa ma jiro, cid kasta haddii loo geeyo, xittaa Ina Sanweyne, oo garta ugu haysta Soomaalidu. Sidaas aanu idinku xukunay, ayuun bay nagu raacayaan. Markaas sidaas garta go’aankiida ku aqbala, oo ku qaata.